Myanmar 18 Plus: တမ်းတတတ်သည် Myanmar 18 Plus
တမ်းတတတ်သည် ''ပြွတ်" ဆိုတဲ့ အသံနဲ့ အတူ မွန့် စောက်ပတ်ထဲ ကထွက်သွားတဲ့ လီး မဲမဲချောင်းကြီးကို ကြည့်ပြီးစောက်ပတ်ထဲ ဟာတာတာ ခံစားလိုက်ရတယ်သောက်လေ သောက်လေ ငတ်မပြေတဲ့ ဆားငံရေလေစာမေးပွဲတွေ အဲလောက် အများကြီး ရှိတဲ့ ကြား က နေ လာပြီးအလိုးခံရတဲ့ ဘဝလေ အရင်ကတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး နောက် မဖြစ်တော့ဘူး ဆိုပေမယ့် နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ခံစား၇တော့လဲ မငြင်းနိုင်တော့ဘူးကွယ်
ကိုဟိန်း တော်ရင် ပြန်တော့မယ် ဒီနေ့ က ပင်ပန်းနေတယ် နောက်နေ့ လာခဲ့မယ် အခုလဲ ဆေးရုံက တန်းလာရတာ ဟောက် ဆာဂျင် ဆင်းပြီးကတည်းက အပြင် ဆေးရုံတစ်ခုမှာ စဆင်းတော့ဟိန်းလတ်နဲ့ စတွေ့ တာပဲ သူက အသားညိုညို နဲ့အရပ် ကတော့ ပုံမှန်ပါပဲ ရုပ်ကတော့ ကုလားဆင်ရယ် ကိုယ့် အပေါ် အနွံတာခံတာရယ် ဂရုစိုက်တာလေးတွေနဲ့ ပဲ တွဲခဲ့တာပါ လိုအပ်တာလဲ မရှိစေရဘုးလေချစ်လို့ ရယ် မဟုတ်ပေမယ့် ကျောင်းကလဲ မဟုတ် ကျောင်းတုန်းကတော့ ချစ်သူရယ်လို့ တော့ မထားဖူးပါဘူးစာတွေနဲ့ရောထွေးနေတာရယ် ... ဂိုက်လိုက်သင်တာရယ် မိဘတွေက ကိုယ်နဲ့ အတူတူ နေတာမဟုတ်တော့ကိုယ့်ဖာသာ ချက်စား...လျှော်ဖွတ်ဆိုတော့ကျန်တာတွေ ခေါင်းထဲ မထည့်မိဘူးရယ်မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာက ဟိန်းလတ်နဲ့နေတာကို ပြောတာတော့ မဟုတ်ဘူးအကြောင်းအရင်း သူ့ အကြောင်း အကုန်မသိသေးပဲနဲ့ဒီလိုတွေ ဖြစ်ခဲ့တာရယ်တကယ် ချစ် မချစ် မသေချာပဲနဲ့အလိုလိုက် အလိုက်သိတာတွေကို သာယာမိခဲ့တာတွေကိုပေါ့ အချိန်သိပ်မရတော့ အပြင် ထွက် ချိန်ရယ်လို့ တော့ သိပ်မရှိတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလဲ သိပ်ပြီး မရ်ိပ်မိတော့တူတူသွား တူတူစားတွေကလဲ အခုလက်၇ှိနေတဲ့ အမကလဲ မသိတော့ အဆင်ကို ပြေနေတာပဲ ဆေးရုံနားမှာ တွေ့ တွေ့ နေတော့ ဒီလိုပဲ ဖြစ်သွားတာပါပဲ သိပ်တော့လဲ မကြာလိုက်ဘူး တွဲနေရာကနေနှစ်လလောက်ကြာတော့ ဆေးရုံကနေ ညဂျူတီကနေ အထွက် ဟိန်းလတ်တိုက်ခန်း လိုက်ရာကနေ အဖွင့် ခံလိုက်၇တာပါပဲ အဖွင့်ခံလိုက်ရတော့လဲ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ပွင့်သွားတာပေါ့ ဖွင့်တဲ့နေ့ ကဆို ကိုယ် မျှော်လင့်ထားတဲ့ SEX က အေးအေးဆေးဆေးလေးထင်ပေမယ့်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနဲ့ ဘာဂျာတွေ ကို ကင်းမြှီးကောက်ထောင်ပြီး အမှုတ်ခံရတာတွေ ခေါင်းက အောက်စိုက်နေတော့ ဟိန်းလတ်လီးကို ကိုယ့်ဖက်က အလိုက် တသိနဲ့ပြန် စုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့ Oral sex တွေ စုံလို့ ပါပဲ.....ကိုဟိန်းလီး
က ထိပ်က ဖြတ်ထားတာတွေ့ တော့ ကျန်းမာရေး ရှု့ ထောင့်က ကြည့်တော့ ကောင်းသားပဲ သူ့family ကလဲ ဒီလိုလုပ်ပေးထားတာပဲ ဆိုပြီး ၇ိုး၇ိုးလေးပဲ စဉ်းစားမိတာအဲဒီ့ နေ့ ကတော်တော် အီစိမ့်သွားတာ ခုတင်ပေါ်မှာ လူကို လိုးတာ ချာလပတ်ကို ယမ်းနေတာပဲ ပက်လက်တွေရော လေးဖက်ထောက်တွေရော ....ဒါတောင် first time မှာတောင် အပျိုစင်ကို ဖြုတ်ရတာကို တောင် အားမရနိုင်သေးပဲ လေးချီမြောက်မှာ ဖင် လိုးမယ် ဆိုလို့ ငိုယိုပြီး မနည်းတောင်းပန်ရသေးတယ်သူကျေနပ်အောင် ၆ချီလောက် ညနေ 5နာရီလောက်အထိ မနက်စာစားချိန်ရယ် .....နေ့ လည်စာစားချိန်လေးပဲ နားခဲ့ရတာဂျယ်တွေဆိုတာတော်တော်သုံးရတယ် ...ဒီလောက်လိုးတာ ပူထူကုန်လို့မနည်းကို ဖက်ပြီး အလိုးခံရတယ်သာဒ့် အမ်ဘီတုန်းက ကြည့်တဲ့ အောကားထဲက ကောင်ထက်တောင် ဆိုးသေး တကယ်ကို မညှာမတာလိုးတာ ဘယ်တုန်းထဲက လိုးချင်နေမှန်းမသိဘူးဒီလိုမှန်းသိ ကျောင်းထဲက ဂျူနီယာလေး ကိုယ့်ကို လဲ အခုထိ ကြိုက်နေတုန်းဖြစ်တဲ့ ကောင်းမြတ်ကိုပဲ ပြန်ကြိုက်လိုက်ရ ကောင်းသားသူကတော့ပျော့ဖတ်ဖတ်နဲ ဖြူဖြူ သန့် သန့် လေးပါပဲ အခုတော့တော်ပါပြီ ဆိုတာတောင် မရ သူ့ နဲ့ သွားနေခါနီးဆို အရမ်းကြောက်တာပဲ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ တစ်ခါသွားရင် အနည်းဆုံး 4ချီလောက်ကတော့သေချာတယ်4ချီဆိုတာ သူ ပြီးတဲ့ အချီကိုပြောတာ မွန်ပြီးတာဆိုရင် တော်တော်များတယ်လူကတော့ ပျော့ ခွေပြီးကိုနေတာတစ်ရက်ပေါ့ သူနဲ့ နှစ်ခေါက်လောက်နေပြီးတော့ အိပ်ရာပေါ်မှာ နားနေတုန်းသူ့ ဖုန်းလာလို့ ဘေးနား က နားထောင် အလီ ဆိုတာ သူ့ ကုလားနာမည်ထဲက နာမည်တစ်လုံးမှန်းသိလိုက်ရတယ် ...ကိုယ့်ဖာသာ ဘယ်လောက်ပဲ လွတ်လပ်တဲ့ အတွေးတွေ ၇ှိနေပါစေ ..အသိုင်းအဝိုင်းကတော့ ဘယ်လိုမှ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတော့တွေဝေသွားတယ် ပုံစံကြည့်ရင်လဲ ဘယ်လိုမှ မထင်ရဘူးဆိုတော့ ထားပါတော့ ဖြစ်ခဲ့တာတွေ အခုနောက်တော့ နှစ်ပတ်လောက်မှ တစ်ခါလောက်ပဲ သွားဖြစ်တော့တယ်သွားလည်း မထူးပါဘူး အလိုးခံ၇တာတော့ခံရတာပဲ ဦးနှောက်က တော့ေ၇ှ့ဆက်မတိုးသင့်မှန်းမသိပေမယ့် သွေးသားတွေကတော့ တောင်းဆိုနေတုန်းပဲ .....ဒီလိုနဲ့ အချိန်တွေ ကြာလာတော့ တစ်ရက်ပေါ့ သူနဲ့လမ်းခွဲ သလို အနေအထားတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တယ် ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ အဆက်အသွယ် တစ်ခု နဲ့ တစ်ခုကြား တော်တော် ကြာပြီးမှ သူ့ ဖက်က ချိန်းဆိုမှု တစ်ခုကို လက်ခံခဲ့တယ် """" ထားခဲ့တော့မယ် ဆိုရင်လဲ ခဏ ငါ့ရဲ့ နဘေးနားမှာ ........."""""ဂျီလတ်သီချင်းလေးပို့ ပြီးတောင်းဆိုတော့လည်း တစ်ခါလောက်တော့ ခွင့်ပြုနေချင်မိတယ်ဘာလို
့လဲ ဆိုတော့ ကောင်းမွန်နဲ့ က ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီး အမနဲ့ ကောင်းမွန် နဲ့ ကလည်း အိမ်ကို ဝင်ထွက်နေတော့ ဟိုဖက်အိမ် ဒီဖက်အိမ် သိနေပြီပေါ့ ကိုဟိန်းကိုလဲ ပြောလိုက်တယ် လက်တွဲကြဖို့ ဆိုတာ အဆင်မပြေဘူးလေ တစ်ခန်းရပ်လေးပဲကောင်းပါတယ်လို့တစ်ခန်းရပ်တွေကတော့ ဆက်ရန် ဆိုပြီးပေါ်လာတတ်တာတော့ ...ကံကြမ္မာ လို့ခေါ်ရမလားပဲ
ကောင်းမွန်ကိုတော့ ပြောပြဖူးပါတယ် .....ဟိန်းလတ်နဲ့ ကြိ်ုက်ခဲ့ဖူးတာရယ် အတူတူနေခဲ့ဖူးတာရယ်ပေ့ါ မ ရယ် ပြီးခဲ့တာတွေအတွက် ကျွန်တော် ဘာတတ်နိုင်မှာပဲ နောက်ဖြစ်လာမယ့် အနာဂါတ်ကိုပဲ.. ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် အကောင်အထည် ဖေါ်ကြတာပေါ့ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် က လျှောက်၇မဲ့ လမ်းကလဲ တူတယ် မကို ချစ်ခဲ့တာ အခုမှ မှ မဟုတ်တာ မောင် ခွင့် လွှတ်တယ် ကျေနပ်တယ် ဆိုရင် ပြီးတာပါပဲ...." နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တော့ နင့် တစ်သက် မမေ့အောင် ကြည့်ခွင့်လေးတော့ပေးခဲ့ပါလား... ဘယ်တော့မှ အပြစ်တွေ မမြင်ပါဘူး...."အား.... အရမ်း မဆောင့်နဲ့ ကွာ...ကောင်းလို့ ပါ ......အရမ်းကောင်းတယ် မတွေ့ တာကြာလို့မသိဘူးကြပ်နေတာပဲဒီမှာ...သေတော့မယ် ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ......နောက်ဆို လိုးရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး မွန် ရယ်ဒီနေ့ တော့ မွန့် ကို တစ်သက် မမေ့အောင် လိုးပေးမလို့ လုပ်ကွာ..... အိမ်ကိုတော့ ညနေ ပြန်မှာနော်..နောက်သုံးလေးရက်ဆို မင်္ဂလာဆောင်က ကပ်နေပြီ....မောင်....က နယ် ခဏပြန်ပြီး သူမိဘတွေ ပြန်ခေါ်နေလို့ အခုလို လာခဲ့တာလာတုန်းကတော့ စကားပြောဖို့ ပဲလာတာခံစားနေရတဲ့ မျက်နှာလေးတွေ့ တော့ လိုက်လျောမိတာ အရင်ကလဲ ဒီကိစ္စတွေပဲ ရှိခဲ့တာပဲဆိုတော့ချစ်တယ်ဆိုတာ .....တကယ်တော့ မရှိပါဘူး.... ကိုယ့်လိုအင် ဆန္ဒတွေအတွက် ပဲ ဆန့် ကျင်လက်လိင်တွေကို လိုအပ်တာပါ....ဖေါင်း......ဖေါင်း.......ပြွတ်ပြွတ်....ဗွက်...ဗွက်..အာ.. ပြွတ်........အာ့ ဘာလို့ ဆွဲထုတ်လိုက်တာလဲ....တစ်မျိုးစမ်းချင်လို့ဘာတွေ စမ်းမလို့ လဲ ...ဒီလောက်လုပ်တာပဲ တော်တော်စုံနေပြီကိုယ်တို့တစ်ခါကြည့်တဲ့ ဗီဒီယို ထဲကလို လုပ်ချင်လို့ နော်...ဘယ်လို ဟာလဲ .....သဇင့်အောကားလိုလေ...အခုလဲ လုပ်နေတာပဲ ဟိုလေ.... blindfold လေး လုပ်ပြီး မွန့် ကို လုပ်ချင်လို့ ဟာ ဒီတိုင်းလုပ်လဲ ရနေတာကို ကိုရယ် လုပ်ပါ မွန်ရယ် ဒီတစ်ခါတည်းပါ အမှတ်တရပေ့ါပြောမရလဲ သဘောပဲ.... အင်းမွန်လဲ ကိုဟိန်းလတ် သဘောကျ နေ ပေးလိုက်တယ်..သူ့ တိုက်ခန်းမှာကလဲ ဘယ်သူ့ မှ မရှိဘူးလေ... ဒါဆို ခဏလေးနော် ကို ကြိုးသွားယူလိုက်မယ် ဟိုဘက်ခန်းမှာ....မွန်လဲ ခဏစောင့်နေလိုက်တယ် သူပြန်လာတော့ ....အကျီင်္တွေတော့ မချွတ်သေးဘူးမွန် ခေါင်းငုံ့ ပေးဆိုပြီးBlindfold လေးစွပ်ပေးတယ်...ပြီးတော့ လက်ကို ပဝါစအရှည်လို ဟာလေးနဲ့ချည်ထားပြီး နောက်ပြန်လှည့်ပြီးနံရံလေးမှာ ကပ်ပြီး မတ်တပ်လေး ဖြစ်အောင်ထိန်းပေးထားတယ်..ကိုက အဲလို လုပ်နေရင်းနဲ့ ပဲ မွန် စိတ်တွေ လှုပ်ရှားလာတယ် သဇင့်၇ဲ့ အောကားထဲ က သဇင်တစ်ယောက် ဘယ်လိုများခံစားနေရမလဲဆိုပြီးခြေထောက်လေးနှစ်ဖက်ကို လိမ်ပြီး မတ်တပ်ရပ်နေလိုက်တယ် အချိန်ကိုက်ပါပဲ....အခန်းထဲကို လူတစ်ယောက် အသံဖွဖွလေးပေးပြီး ဝင်လာတယ် ပြီးတော့ အခန်းထဲက လူနှစ်ယောက် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မျက်ရိပ် ပြလိုက်ကြတယ် တစ်ယောက်က သဇင့်နောက်ကနေ တိတ် တိတ်လေး ခွာပြီင်္း....နေရာဖယ်ပေးလိုက်တယ် နောက်ကနေ ရောက်လာတဲ့ တစ်ယောက်ကတော့ အရပ်အမောင်းကတော့ ဟိန်းလတ်ထက် မသိမသာ ပိုမြင့်ပြီးတော့ လူကောင်လဲ နည်းနည်းထွားတယ်ပို သိသာစေတာကတော့ တွဲလောင်းကျနေတဲ့ မပျော့မမာ အနေအထားမှာတောင် ဟိန်းလတ်ရဲ့တောင်နေတဲ့ အနေအထားထက် ပိုကြီးပြီး ရှည်မျောမျော ဒစ်ဖြတ်ထားတဲ့ လီးမဲမဲကြီးတစ်ချောင်းပါပဲ
ကော့နေတဲ့ မွန်မွန့် ဖင်တွေကို လီးနဲ့ ဖွဖွလေးတို့ ပေးလိုက်တော့မွန်လဲ အသဲယားပြီး ကြက်သီးတောင်ထတယ်သဇင် လဲ အဲလို ခံစားရမှာပဲ ထင်တယ်ကို လုပ်တော့လေ....လူမဲကြီးက ... မွန့် ပေါင်တွေကို ဖြဲလိုက်တယ် ပြီးတော့ ကုန်းပြီး ဖင်သားလေးတွေကို လျှာ နဲ့ လျှက်ပေးတော့အင်းးးးးး မှုတ်ရင်လဲ မှုတ်ကွာ.. ဒီမှာ မနေတတ်တော့ဘူးပလပ် ပလပ်.....ပလပ်..ယားတယ်ကိုရယ် မျက်နှာဖုံးတပ်ပြီး မှုတ်နေတာလားးပေါင်ကြားထဲမှာ မုတ်ဆိတ်မွှေးတွေလို နဲ့ဘာတွေ အဆန်းထွင်နေပြန်ပြီလဲ မသိဘူးမှုတ်ခံရတဲ့ အထဲ ဒီတစ်ခါ....ပိုမိုက်တယ်အမွှေးတွေပါ ပါတော့ကိုတစ်ယောက်ကလေ တော်တော် အတတ်ဆန်းချင်တယ်ကောင်းလိုက်တာာအာ... ပြီးပြီကွာ ကောင်းလိုက်တာဖြောင်းးးး ဖြောင်းးးးး ဖြောင်းးးးးနာတယ်...ဘာလို့ အရမ်းရိုက်နေတာလဲ ဖင်သားလေးတွေက ကို လူစိမ်းက လက်ကြမ်းကြီးတွေနဲ့အားရပါးရ နှစ်ချက်က ရိုက်ပလိုက်တယ်ပြီးတော့ မာတင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ သူ့ လီး ကို တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက် ဂွင်းတိုက်ပြီးတော့မွန့် မွန့် ခါးလေးကို ကိုင်ပြီးလီးနဲ့ စောက်ပတ်တေ့မိအောင် ချိန်နေတယ် မွန် ကလဲ ဘယ်ရမလဲ နာအောင်ရိုက်တော့ ဖင်ကို ဟိုဒီဖက် ယမ်းပြီး တေ့လို့ မရအောင် လှုပ်ပေးလိုက်တယ်မှတ်ပလား ရိုက်ချင်ဦးအဲတော့မှ ကိုလူစိမ်းက လီးကိုကိုင်ထားတဲ့ လက်ကို လွှတ်ပြီး မွန့် မွန့် ခါးကို ကိုင်ပြီးငြိမ်အောင်လုပ် ပြီးတော့ ဖင်ကြားထဲကို တံတွေးထွေးချတယ်တံတွေးတွေက ဖင်ဝကို ဖြတ်ပြီး စောက်ပတ် အဝ အရောက် မွန်ကလဲ ယောင်ပြီး နွေးသွားလို့ဖင်အကော့ ကျမှပဲ လီးကို ကော့ဖင်ကို တစ်ချက်ကောက်ပြီး ချိန်သားကိုက်လီးထိုးချပလိုက်တယ်ပလစ်.....ပလစ်....အားနာတယ် ဘာတွေ လုပ်ထားတာလဲ နာတယ် ပြန်ထုတ်လိုက် ကိုဟိန်းလတ်မွန် နာလွန်းလို့ကော့နေတဲ့ ဖင်တောင် နံရံကိုကပ်သွားတယ်လီးကတော့ အဆုံးမဝင်သေးပါဘူးနံရံမှာ ကပ်နေတဲ့ မွန့် စောက်ပတ်ထဲ ဝင်အောင် သူ့ အရပ်နဲ့မတူတဲ့အတွက် ဒူးကို ကွပြီး ပင့်လိုးပြီး ရသလောက်ဝင်အောင်လုပ်နေတယ်တော်ပြီနော်...ဟီးးးး ဟီးးးးးးးနာတယ်ခွေးကုလားဟိန်းထက် နှမသားချင်းကိုယ်ချင်းမစာနာ .......အတင်းလုပ်တယ်..ကောင်မ နင်မှ ငါ့ကို မယူချင်တာ .....အခုလိုးနေတာ ငါလိုးနေတာ မဟုတ်ဘူးငါ့ ဦးလေး အီစမိုင် လိုးနေတာနင် ယုတ်မာလှချည်လား..ငါ့ကို အခုလွှတ် ခွေးကုလားပလောက်....လီးက စောက်ပတ်ကနေ ....ကျွတ်ထွက်သွားတယ် အလီ ဒီကောင်မကို မျက်လုံးကာကို ချွတ်ပေးလိုက် ကုလားလီးဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး လိုးပြမယ်နင့်မျက်နှာကို တည့်တည့်ကြည့်ပြီးလိုးမယ်မွန့် ကို အတင်းခုတင်ပေါ်ကို တင်ပြီး BLINDFOLD ကို ခွာလိုက်တယ်မြင်လိုက်ရတာ တော်တော်ရုပ်ဆိုးတဲ့ ကုလားကြီးတစ်ယောက် မဲနေတာ့ပဲ...လက်ကတော့ ချည်ထားတာက မလွှတ်သေးတော့ ရုန်းလေ လက်နာလေပဲဖြစ်နေတာပက်လက်လဲဖြစ်သွားရော အတွန်းခံလိုက်ရလို့သတိလွတ်သွားတဲ့အချိန် လက် က နောက်ပြန်ချုပ်ထားတော့ ခါးလောက်မှာ ခုနေတယ် တော်သေးတာက မွေ့ ယာဖြစ်နေတယ်အီစမိုင်လဲ အလစ်မှာ ပေါင်ကြားထဲဝင် ပေါင်နှစ်ဖက်ကို အလယ်ကနေလက်နဲ့ ထောက်ထားတော့ပေါင်ကို ဖြဲထားသလိုဖြစ်နေတုန်းလီးမဲမဲကို စိုက်ချပြစ်လိုက်တော့နောက်တစ်ချက် သေလောက်အောင်နာတယ်ဒီတစ်ခါကတော့ အဆုံးထိဝင်တယ်ခွေးကုလား နင့် နှမကို သွားလုပ် အခုပြန်ထုတ် ထွီးးးးးမျက်နှာကို တံတွေးထွေးခံ၇တော့ အီစမိုင်က..အေး ထွေး..ဒီမှာကြည့် နင်ထွေးလိုက်တဲ့ တံတွေးတွေ နဲ့ နင့် ဖင်ဝကို သုတ်ပြီး ဖင်ပါလိုးပစ်မယ်ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့လက်က မျက်နှာကတံတွေးကိုယူ ခါးအောက်ကနှိုက်ပြီး ဖင်ဝကို သုတ်လိုက်တယ်လန့် ပြီး အား မလုပ်ပါနဲ့ ဆိုပြီး ခါးက လန့် ပြီးအကော့ ....အပ်ါစီးကနေ ဆောင့်ဆောင့်လိုးတာရုန်းရင် ရုန်းတဲ့ဘက်ကို လိုက်ပြီးလိုးတာလိုးနေတဲ့ကြားက နို့ တွေကိုလဲ အလွတ်ပေးခံရတာ မဟုတ်ဘူးနို့ လဲ အစို့ခံရတော့ မုတ်ဆိတ်ပါပါတော့
အလိုးခံနေရင်းနဲ့....စောက်ပတ်ကလဲ အလိုက်ကမ်းဆိုးမသိဘူးအရည်တွေကော အသံတွေကော ထွက်တာ စုံနေတာပဲ မုန်းတယ်...စောက်ဟိန်းလတ်....... ရင်ထဲမှာ စကားတွေ ရှိပေမယ့်အတွေ့ နောက်ကို အသိက လိုက်နေတယ် ... မျက်ရည်တွေ ဝဲနေတဲ့ မွန့် ရဲ့ မျက်နှာလေးက သနားဖို့ ထက် ဆွဲဆောင်တဲ့ မျက်နှာလေးမျိူးများဖြစ်နေမလား....တော့ မသိဘူးလိုးချက်တွေကတော့ ......စိပ်လာတယ်ကောင်းလာပြီ......ငါလိုချင်တာတွေ မဟုတ်ဘူးဒီခံစားမှုတွေ မပေးပါနဲ့...နာတယ်...နာတယ်.....နာတယ်.....ပြွတ်.......နာတယ်...နာတယ်.....ကောင်းလာပြီ...ပတ် ပတ် ...ပြွတ်.....ဖတ်..ဖတ်...ကောင်းတယ်...မုန်းတယ် ဒီကုလားကြီးကို ......လရည်တွေ ထွက်လာပြီ...အားးးး.....မလုပ်နဲ့ အများကြီးပဲ ...မကုန်သေးဘူးးးးးးထွက် နေတုန်းပဲ...ညှစ်ပေးသလို ဖြစ်နေပြီ....မွန်ညှစ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး...မကုန်သေးဘူး....ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီလဲ...ကောင်းတာကွာ.......အလီ.....စောက်ရမ်းလိုးကောင်းတဲ့စော်ပဲ....မင်းကံကောင်းတယ်.....စောက်ပတ်က ဖေါင်းတင်းပြီး လိုးချက်တွေကို ပင့် ပင့်ခံတာ...မဟုတ်ဘူး....ဟိန်းလတ်ရယ် တောင်းပန်ပါတယ်..... ကြိုးဖြေပေးပါတော့ လက်တွေ နာလှပြီ...ဦးလေးရယ် ပြီးရင်လည်း..တော်ပါတော့နော်...ဟား...ဟား......ဟား.....အဲလို ပြေပြေလည်လည်..ပြောရင် ဖင်တောင် အလကားလိုးပေးလိုက်မယ်(မချစ်သော်လည်းအောင့်ကာနမ်းတဲ့ ဒီအချိန်မှာ အာခံနေရင် ...ဘာမှ ထူးလာမှာမှ မဟုတ်တာာမွန် ရေသွားဆေးပါရစေရေနဲ့ထိလိုက်ရင်....စပ်တယ် သေချာတယ် ...အောက်သားလေးတော့ ကွဲသွားပြီ...စောက်ပတ်တစ်ခုလုံးလဲ..နီရဲနေပြီ...အီးးးး ဟင့်မျက်ရည်တွေ ကျလာတော့ မထူးပါဘူးဆိုပြီးးး ရေပန်းအောက်မှာ ခေါင်းထိုးပေးလိုက်တယ်...ခဏနေတော့ ဟိန်းလတ်က.... လာပြီး ရေချိုးခန်းထဲက ခေါ်ထုတ်သွားတယ်..တာဝါ လေးနဲ့ ယုယု ယယ လာသုတ်ပေးတယ်..ဟိန်းလတ်ကို ဖက်ပြီး ငိုမိတယ်ရက်စက်တယ် ... ကိုဟိန်းလတ်..ဟီးဘာလို့ကိုယ့်ချစ်သူ တစ်ယောက်ကို အဲလို လုပ်နေတာလဲ ပြီးတာတွေ လာမပြောနဲ့ တော့ မွန်....ပြန်စရအောင်...တော်ပြီနော်မွန့် ကို သနားရင် အိမ် ပြန် ပါရစေနော် အစောကြီး ရှိသေးတာ ... ခဏနေဦးနော်ဘာလဲ ဆက် အလိုးခ့ပေးနေရဦးမှာလားးမလုပ်ပါနဲ့တော့နော်...အခုမှ တော့ လာပြီး တားမနေနဲ့ တော့ ဦးလေးလဲ အိမ်ရှေ့မှာ အရက် သောက်ပြီး စောင့်နေတယ်သူဝဦးမှာ မဟုတ်ဘူးးး.အောင်မလေးးးး.....(ဆိုပြီး ဒူးခွေကျသွားတော့ ဟိန်းလတ်က ပွေ့ ပြီး အိမ်ေ၇ှ့ကို ခေါ်သွားပါတော့တယ်)
အချိန်တွေ ကုန်လွန်ခဲ့တော့လည်း မွန့် အတွက် အတိတ်တွေ က မလှပပေမယ့် အနာဂါတ်တွေတော့ လှပမယ်ထင်ရဲ့ကွယ် အခုတော့ ဘေးနားမှာ လဲ ကိုယ့် ချစ်တဲ့ ကိုယ့် အပေါ်နားလည်မှု ရှိတဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်လဲ ရှိနေပြီ ယောက်ကျားက GP ဖွင့်ပြီး အလုပ် ကြိုးစားနေတော့ နောက် နှစ်လောက်ဆို ဘွဲ့ လွန်တောင် ဝင် ဖြေဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ် လူတွေ က ဆရာဝန် ဖြစ်နေတာ ကို မြင်တာ သူပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ အရာတွေကို ဘယ်သူမှ မြင်တာမဟုတ်ဘူးမမဆိုရင် အခုလို ၇နှစ်ကျော်ကြီး သူပဲ ဒုက္ခခံ ပြီး ကြိုးစားပေးခဲ့တာ မွန် ကလဲ ကျေးဇူးသိတတ်တော့ ဆရာဝန်လဲ ဖြစ်ကောယောကျာင်္း ယူလိုက်ကကော တော်တော် အားကိုးရတဲ့ ညီမလေ မောင်ကတော့
အတိတ်က အကြောင်းတွေကို ဘာမှ အပြစ်မတင်တဲ့အတွက် မျှော်လင့်ထားတာထက် ပိုကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့တာတော့ လောကကြီးကို ကျေးဇူးတင်ရမယ်..ဒါပေမယ့် မောင်နဲ့ တူတူအိပ်တဲ့အခါကျတော့ တစ်ခါတစ်ခါတော့ လဲ အားမလို အားမရတော့ ဖြစ်သားတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်နေကြလို့ သာ ကြည်နူးမှုနဲ့အဆင်ပြေ ပြီးမြောက်နေကြတာတစ်ခါတစ်လေတော့လည်း….ကျေနပ်အားရမှုဆိုတာတော့ လိုချင်သားရယ် ကောင်းမြတ်တစ်ယောက်ကတော့ အချိန်တွေ အကြာကြီး လိုချင်ခဲ့ရတဲ့ မွန် မွန့် ကို အခုလို တရားဝင် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ရတော့ တစ်လောကလုံးမှာ သူ့ လောက်ပျော်တဲ့လူတောင် မရှိဘူး…လို့ တောင် မင်္ဂလာဆောင်တုန်းက တွေးတွေးပြီး ပြုံးနေလို့ မ ကတောင် တားရတယ် .(ကျွန်တော်က မွန့် ကို မလို့ ခေါ်တာဗျ). အဲလောက်ကြီး ပြုံးနေရအောင် မောင်ဘာတွေ လုပ်ထားလဲ ပြောလို့မနည်း မျက်နှာပိုးသတ်ရတယ်မင်္ဂလာဦးညလဲေ၇ာက်ကော တစ်ကိုယ်လုံးကို သေချာကို နမ်း ပွတ်သပ်ပြီး ချစ်ပေးလိုက်တယ် အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းတယ် မ ကို အိပ်ယာပေါ်က ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျေနပ်အောင် ကြိုးစားပေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်… တစ်ခုပဲ ကံမကောင်းတာက မရဲ့ ပထမဆုံး လူတစ်ယောက် အဖြစ် ဖြစ်ခွင့်မရှိခဲ့တာရယ် အရင်လူနဲ့ မ က တော်တော်ကြီး ပက်သက်ခဲ့တာတွေကို မ က ပြောတော့ ပထမတော့ တစ်မျိုးပဲ နောက်တော့ အဲလို ဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေကို ပြန်ပြန်မေးပြီး လိင် ဆက်ဆံကြတာ .. အဲလို အခါမျိုးတွေကျရင် မ ရဲ့ စိတ်တွေ ပိုထလာပြီးတော့ ပြီးမြောက်တာတွေ မြန်မြန်သွားတယ်ဒီလို အခြေအနေလေးတွေကြောင့်လဲ ကျွန်တော်က ခဏခဏ ပြောပြီး လုပ်ဖြစ်ကြတယ်ရင်ထဲမှာတော့ မ သာ စိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခွင့်ပြုထားမယ်လို့ တော့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားတယ် မ ပျော်ရင် စိတ်ချမ်းသာရင် ကျွန်တော့် ဘဝကြီး ပြည့်စုံပါတယ်…….…….…….…….သက်မွန်တစ်ယောက်တော့ လောကကြီး ကို မေ့ပြီး အင်တိုက်အားတိုက် ဆောင့်လိုး တာကို ခံနေရပြီး ရှက်စရာကောင်းတာဆိုတာ ဘာမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး ဟိုတယ်က ကန်တော်ကြီးနားက လူတွေ သိပ်မသိတဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့စနေနေ့ လေးမှာပေါ့ တစ်ပါတ်တစ်ခါတော့ ဒီကိုလာပြီး ကာမ အလိုတွေ ဖြည့်ပေးနေရတာပေါ့ စနေနေ့ ဆိုတော့ နေ့ ဝက်ဆိုပြီး လာတည်းနေတာပေါ့ ကိုထွန်းဆိုတာလည်း ချောချော လှလှ လူတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး အသားမဲ မဲ အောက်သားတစ်ယောက်ပေါ့ ဟိုးငယ်ငယ်တုန်းက လှေ လိုက်ပြီး အခုကျတော့ လှေ ပိုင်နဲ့သင်္ဘောပိုင်နဲ့အစစ အဆင့်မြင့်လာခဲ့သူပေါ့ အရင်တုန်းကဆိုရင် လှေပေါ်မှာပဲ ကိစ္စပြီးခဲရတာပေါ့ နောက်တော့ အဲဒါတွေ မလိုတော့ဘူးလေ ပိုက်ဆံရှိလာတဲ့ နောက်တော့ ကောင်းကောင်းပဲ စားတော့တယ် အပျိုစစ်စစ်တွေကျတော့လည်း အဆင်မပြေဘူး ပြီးတော့ လိုချင်တဲ့ပုံစံမပေးနိုင်တာများတယ်ပါကင်ဆိုပြီး သွားမလုပ်နဲ့သွေဒထွက်တာပဲ အဖတ်တင်တယ် ကျန်တာတွေ က ဘာမှ ကို မကောင်းတာ ပြီးတော့ ပြောရဆိုရတာ ခက်သေးတော်ပါပြီ..အခု ဒီဆော်ကျမှ လိုးလို့ ကိုကောင်းတာ တော်တော်လဲ အပေးကောင်းတယ် ဆွဲနေတာတော့ ကြာပြီ ပေးခဲ့တာပိုက်ဆံဆိုတာ ….ဆောရီးဗျာအပြောမတတ်လို့ …. သူ့ ကိစ္စတွေတော့မဟုတ်ဘူး.. သူ့ ညီမ ကိစ္စတွေအတွက်..ပိုက်ဆံလိုလို့ချိတ်ဆက်မိရာကနေ တွေ့ ခဲ့တာ တော်တော် တောင့်တဲ့ဆော်တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်မှာ သင်္ဘောတွေ အတွက် အလုပ်ရှုပ်နေလို့မတွေ့ ဖြစ်တဲ့နေ့ တွေဆို လီးကိုတောင်နေတာပဲ တော်တော်လိုးလို့ ကောင်းတဲ့ဆော်… ကလေးတစ်ယောက်အမေ ယောကျာင်္းလဲ ရှိတယ်ပိုက်ဆံဆိုတာတော့ ကျွန်တော့်အတွက် ဆိုတာ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးပြောတာာကြာတယ် .. သက်မွန်ကို လိုးရတာ လွှတ်ကောင်းပဲ ဖေါင်း ဖေါင်း…. ဖေါင်း ပြွတ် ..ပြွတ်….လိုး၇တာ သိပ်ကောင်းတယ် ….. သက်မွန်ကော….. အားးး… ကောင်းတယ်….ပြင်းပြင်းလေး ဆောင့်ပေး….ဒီလိုလေးလား….. ကျွန်တော်လည်း လီးကို မွှေ့ ထိုးလေး လိုးပေးလိုက်တယ်အင်းးးးး အဲလိုလေး လိုးပေး… ထိတယ်ကွာ…..နောက်တစ်ချီ ပြီးရင်… ဖင်လိုးချင်တယ်ကိုထွန်းက အရမ်းလိုးတာပဲ.. ဖင်လိုးရင် တော်တော် နာမှာဒါဆိုလဲ .. သက်မွန် အပေါ်ကနေ နေပေးလေ….သက်မွန်ဖင်လေးက သိပ်လိုးကောင်းတာ….ဖင်ထဲကိုလဲ လရည်တွေ ထည့်ပေးထားမယ်..ပြန် မထုတ်နဲ့အိမ်ယူသွားနော်…တော်ပါ… ယောကျာင်္းနဲ့ လိုးတုန်း လရည်တွေ ဖင်ထဲက စီးကျလာမှ ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေမယ်အရင်တစ်ခေါက်တုန်းကလဲ လရည်တွေ စောက်ပတ်ထဲ ကျန်လို့ .. မနည်း မရိပ်မိအောင် ပြောရသေးတယ်….
အားသက်မွန် ခါးလေးပြန်ကော့ပြီး တောင့်တောင့်လေးနေပေး...တစ်ချက်ချင်း လီးဝင်တာ ကြည့်ပြီး လိုးချင်လို့ ...သဘော....အားးး...ကိုထွန်း အဆုံးထိ ခဏလောက် ထည့်ထားပေးကွာ...ဒီမှာ ကောင်းနေပြီ.....ဟားးး ...ပြီးပြီကွာ....... သက်မွန် စောက်ပတ်လေးက ညှစ်တာကို မခံစားနိုင်တာနဲ့လီးကို ကော့အထိုး မှောက်ခုံလေးဖြစ်သွားတာနဲ့ ...အားရပါးရ ရိုက်ချက်ပြင်းပြင်းလေး အဆက်မပြတ် ရိုက်ပေးလိုက်တယ်....ဒီကောင်မ လိုးရတာ စိမ့်နေတာပဲ ...........လရည်တွေ...ဆိုတာ.. ညှစ်ညှစ်ယူတာ.... စောက်ပတ်ကိုက ညှစ်အား သိပ်ကောင်းတာ...ဒါကြောင့်လဲ... အပတ်တိုင်း စနေဆို ...ဦးထွန်းလာမယ်ဆိုတာချည်းပဲ ဟိုတယ်ကကောင်လေးတွေဆိုတာ ......အခန်းကို ထောင့်ခန်းပဲပေးတာ ဒီကောင်တွေ ချောင်းနေတာလဲ သိတယ် အရင်တုန်းကတော့ ....အခန်းက အတည်တကျမဟုတ်ဘူးနောက်တော့ စနေဆို ..ဒီအခန်းပဲ ပုံသေဖြစ်နေပြီ...ဟိုတယ်က ကောင်လေးတွေ ချောင်းနေတာသိတော့ လိုးရတာ ပိုကောင်းတယ်သက်မွန်အော်တာလည်း တော်တော်ကျယ်တယ်ဂျပန်မတွေထက်တော့ မလျော့ဘူးအော်သံလေးကြောင့်လဲသဘောကျတာ ဖြစ်မယ်..ချောချော လှလှ တောင့်တောင့်လေး အပေးကောင်းလေးး..နှစ်ချီပြီးစားတာတောင်..မရိုးနိုင်သေးတဲ့ ကောင်မလေး...သူ့ ညီမကိုပါ စားချင်တာ ..အိမ်ကို သွားရင် မတွေ့ လို့ မဆုံဖြစ်တာများပါတယ်...ကိုထွန်း ပြီးရင်လဲ ထတော့ ဒီမှာ ပိနေပြီ.... ဒီအတိုင်းလေးပဲ နေဦး...... အရည်တွေ ကို ညှစ်ထား... မထွက်စေနဲ့ ကိုထွန်းကလဲ ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး အရမ်း အနိုင်ကျင့်တာပဲ မှောက်ခုံလေး အိပ်နေ ဒီအတိုင်းလေး ကြည့်နေချင်လို့ ပြီးရော...ကိုထွန်းလဲ Room Service phone ကို ကောက်ကိုင်လိုက်တယ်...မင်္ဂလာပါ.... အကို..ဘာများသုံးဆောင်ချင်ပါလဲ ...အေးးးး....ဘီယာ နှစ်လုံး tiger ပဲ ပေး...ပြီးတော့ ကြက်သားလုံးကျော်.... shark တစ်ဗူး...ပေးအကို လက်ကျန်ပေးထားတဲ့ Double Black ပါ ချပေးး ကွာနော် ညီရာ…ပြီးတော့ အရင် ပို့ နေကျ ကောင်လေးပဲ ပို့ ခိုင်းလိုက်ကွာ….အကို မောင်လွင်က နားတယ် အကို ကျွန်တော်တော့ မေးကြည့်ဦးမယ်တခြားလူ ပို့ ရင်ကော အဆင်ပြေလားအကို ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ပို့ နေကျ လူပဲ ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ အကို ကျွန်တော် ကြည့်လုပ်ပေးပါ့မယ်အေးကွာ… အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးပါဦးဟုတ်အကို ကျွန်တော်တို့ အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါ့မယ် မြန်မြန်လေးတော့ လုပ်ကွာ ..နော် …ဟုတ်အကို ဒါပဲနော်.. မောင်လွင် ဟေ့ကောင်ထတော့.. ဟား ငါလိုးမ ..မင်းအမေသေလို့ လာ ခေါ်နေတာလားအေးမင်း အဖေ ခေါ်ခိုင်းလို့ လာခေါ်တာ…..လီးလား။။။ မလာဘူးကွာ..ဟေ့ကောင် ထတော့ ကိုထွန်း ရောက်နေလို့လာခေါ်တာ ဟမှာတာတွေသွားပို့ ရမယ်…ငါဒီနေ့ နားတယ် လေကွာ ရတယ် သွားပို့လိုက်မယ် ငါ့လီးကွာ ညတုန်းက အောကားကြည့်တာ ကောင်းတာကွာ ကြည့်ဦး လီးတောင် ခုထိ မကျသေးဘူးဘောစိကော…..မရှိဘူး မနက်ထဲက မင်းဘာသာ သွားအေး ကိုထွန်း စော်ကြီးက မိုက်တယ်နော်..အပေးကောင်းချက်ကွာ…..မင်းဘယ်လိုသိလဲ…ဒီလိုပဲပေါ့ကွ….လစ်ပြီ ဟေ့ကောင် ကောင်တာမှာ လူမရှိဘူးမင်းတစ်ယောက်ထဲလားအေး နားတဲ့ကောင်တွေ များနေတယ် မင်းတောင် ရှိလို့ တော်သေးတယ်ဟေ့ကောင် ငါ ကိုထွန်း တစ်ခန်းပဲ ပို့ မှာနော် အေးပါ….ပြီးရင် ပြန်အိပ်တော့ အေးးးးးးဒေါက်ဒေါက်ဒေါက်…….Room Service..အေး…လာပြီ…စားစရာတွေလာပို့ နေပြီ…. တော်ပြီ ထတော့မယ်…အဲအတိုင်းပဲနေနော်…………ပြောထားတယ်အထဲမှာ အရည်တွေကော….တော်ပြီကွာ လေကုန်တယ် … ငြိမ်ငြိမ် ခဏလေးနေ အေးလာပြီ ညီလေး…ရေအေး… ဝင်ခဲ့လိုက်ကွာ မင်းပဲ ဘီယာထည့်တော့ တံခါးကိုတော့ လော့ချလိုက်…ဟာာာာာ… စော်ကြီးက ဖင်ပြောင်ကြီးနဲ့လီးပဲ ကွိုင်တတ်တော့မှာပဲ….ဟဟ ဘဲကြီးက မျက်လုံးမှိတ်ပြနေတယ်…ဘာအထာလဲကွ…သူတောင် အလှူပေးနေတာပဲ… ကြည့်တယ်ကွာ…..မိုက်လားး..ညီ….ဗျာ….ဟိုမှာလေ ငါ့စော်လေ မိုက်လား ခုနကမှ ငါလိုးပြီး လရည်တွေ အပြည့်ထည့်ထားပေးတာ….ဟာ ကိုကြီးကလဲ… မနောက်ပါနဲ့ …… အမ ရှက်နေပါ့မယ် ကျွန်တော့်ကို ခွင့်ပြုပါဦး…မင်းကလဲ လာရှက် နေသေးတယ်… ဘီယာထည့်ပေးဦးလေ….ရှက်လိုက်တာ..လူဆိုးကြီး …..သက်မွန်တစ်ယောက် ရှက်လို့ မျက်နှာတောင်… မဖော်ရဲဘူးး..ပြီးရင်တော့ တွေ့ မယ်ကျွန်တော်လဲ အမ ဆီက မျက်နှာလွှဲပြီး ….ဘီယာထည့်ပေးတော့..အကို နှစ်ခွက်လား
အေး နှစ်ယောက်ဆိုမှတော့… မင်းက ဘယ် နှစ်ခွက် ထည့်ချင်လို့ လဲ ဟဲဟဲ... အမ မသောက်ဘူး ထင်လို့ …………..သောက်မှာ ကဲ မင်းလက်ထဲက ခွက် ကို အမကို ပေးလိုက်…ဗျာ…နားမလည်ဘူးလား ပေးလိုက်လေ..ဟုတ်..သက်မွန်လဲ.. မထူးတော့ဘူး ဆိုတော့ လက်ဖဝါးနဲ့ စောက်ပတ်ကို အုပ်ကိုင်ပြီး… ထလိုက်တော့တယ်ကိုထွန်းကိုမှ မလွန်ဆန်နိုင်တာ……...ဟ…ထွက်ကျကုန်ပြီ……စောက်လရည်တွေကလဲ… ဖင်ပြောင်နဲ့ဟိုတယ် စားပွဲထိုးရှေ့မှာ ..လရည်တွေ အပြည့်နဲ့ထ ထိုင်ရတာ ဘယ်လောက်တောင်..နေရခက်တယ်…ဆိုတာ အခုမှ ပဲ ခံစားဖူးတော့တယ်…လှလိုက်တဲ့ စော်ကွာ… သက်မွန်… ဘီယာခွက် ယူလိုက်..ညီလေး မင်းနုတ်လုံတယ် မလားဟုတ်.. ဘာခိုင်းမလို့ လဲ မသိဘူး… အေး..သက်မွန်ရေ… ဘီယာသောက်တော့ … ညီ မင်း စားပွဲပေါ်က Tissue Box လေး ယူလိုက်သက်မွန်ရေ.. မောင်လေးက…. လရည်တွေ သုတ်ပေးမလို့ပေါင်ကားပေးလိုက်….ဟာ မဟုတ်တာ ကိုထွန်းကလဲ..ညီလေး သွား သန့် ရှင်းပေးလိုက်.. မင်းဆီမှာ.. စနိုးတာဝါ ကော ၇ှိလားးရှိတယ် အကို ရေခဲ သေတ္တာ ထဲမှာ ကွိုင်ကော စနိုးတာဝါကော ရှိပါတယ်…မင်း အမကို သန့် ရှင်းရေးလုပ်ပေးလိုက်..ရတယ်မလားးးအကို ကလဲ လာနောက်နေတယ်.. အကို နဲ့အမ သာ သဘောတုရင် ကျွန်တော်လုပ်ပေးမှာပေါ့ကျွန်တော်က ဘာနာစရာရှိလဲ……အေး ဒါဆိုလဲ မင်း အမကို သန့် ရှင်းရေး လုပ်ပေးလိုက်တော့ကိုထွန်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး မကောင်းဘူးကွာ..ဘာမကောင်းတာလဲ… မောင်လေးက အကောင်းနဲ့ ရှင်းပေးမှာကို…. မရစ်နဲ့ တော့ပြောတော့ ကိုထွန်း ကျေနပ်မယ် ဆိုရင် ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ဆို….. အရင်တုန်းက စကားတွေ မေ့ သွားပြီလား အကို… အမ ခွင့်မပြုရင်လဲ … မလုပ်ပါနဲ့… ကျွန်တော်သွားတော့မယ်.. အကို လိုတာရှိရင် လှမ်းခေါ်လိုက်ပါနေပါဦးဟ မင်းကလဲ ဧည့်သည်စိတ်ချမ်းသာအောင် လုပ်ပေးရဦးမယ်လေ..ဟုတ်အကို ကျွန်တော်က အမ ကို အားနာလို့ ပါ…ရတယ် ကိစ္စမရှိဘူး လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ပေးလိုက် ငါ ဘီယာသောက်လိုက်ဦးမယ် ကိုထွန်း ဘီယာ သောက်ဖို့ စားပွဲခုံဘေး က ခုံမှာ ထိုင်ပြီး တီဗွီ လိုင်းဖွင့်တော့ ဒီဟိုတယ် လေးရဲ့ ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ချန်နယ် တစ်လိုင်းမှာ အောကားပါ ထည့်ထားပေးတော့ကို ထွန်းလဲ အသံကို နည်းနည်းကျယ်ပြီး .. ဘီယာလေးသောက်… အရက် လေး တစ်ငုံ ငုံ ကြက်သားလေး တစ်ဖက်လောက် ဝါးပြီး…. ဇိမ်ကျနေတယ်ဒီမှာတော့ ၇ှက်လို့ ရင်တွေတောင်တုန်တယ် ညီမလေးအရွယ်လောက်ရှိတဲ့
ကောင်လေး ကိုယ့်ပေါင်ကြားထဲဝင် ပြီးတော့ စောက်ပတ်ကို သုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့… ပြီးတော့ သူက နုတ်လုံဦးမှ…. တော်ကြာ ဟိုတယ်က သူတွေကို ပြန်ပြောရင် ဒုက္ခ တွေတော့ ဖြစ်တော့မှာပဲ မမ.. ပေါင်လေးဟပေးနော်… ကျွန်တော် မလုပ်ပေးရင် အကို က ပြောနေဦးမယ် မမကို ဆူနေပါ့မယ်ဖြည်းဖြည်းပဲ
လုပ်နော် လက် ကို အရင်သွားဆေးလိုက် … နောက်ပြီးတော့ ဒီလိုလုပ်တာ ဘယ်သူ့ ကိုမှ မပြောပါနဲ့ နော် အမ တောင်ပန်းပါတယ်.. သူ့ ကို မလွန်ဆန် နိုင်လို့ သာ….ဟုတ် အမ… ပေါင်လေး ကာပေးနော် ပြီးတော့ လက်လဲ ဖယ်ပေးနော် လက်ဖယ်လိုက်ရင် ထွက် ကျ လာလိမ့်မယ် ဟုတ်အမ… မောင်လွင်တစ်ယောက် သက်မွန် ဖင်ကြားအောက်ကနေ ပြီးတော့ tissue လေး သုံး လေးရွက် လောက် ထပ်ပြီး
တော့ သက်မွန် ရဲ့ လက် လေးကို ကိုင်ပြီး ဖယ်ခိုင်းလိုက်တော့ သက်မွန်လဲ ရှက် ရှက်နဲ့မျက်လုံးလေး မှိတ်ပြီး ခုတင်ပေါ် လက်ထောက် ပြီး လှန်ချလိုက်တယ် ရှက်နေလို့ လဲ ပြီးတာမှ မဟုတ် တာ မြန် မြန် လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ပြီး သွားတော့လည်း ပြီး တာပါပဲ …စောက်ဖုတ်ကတော့ ကွာ ဖေါင်းပြီး ယောင်ကိုင်းနေတာပဲ.. ဒီဘဲကြီး တော်တော် ချထားလို့ များလား မသိဘူးTissue လေးနဲ့သေသေချာချာ သုတ်ပေးလိုက်တော့ ခြေထောက်လေးတွေ ဘေးကို ပိုကားသွားတယ်အကဲစမ်းသလို ဘာလိုလို နဲ့လက်ချောင်းလေး တွေနဲ့စောက်ပတ်ကို တို့ ကြည့်လိုက်တယ် အိနေတာပဲ… လက်ချောင်းမှာ လရည်တွေ ပေနေတော့ … ဖင်ဝလေးကိုပါ မသိမသာ ..တို့ ကြည့်တော့ တွန့် ကနဲ ဖြစ်သွားတယ် ညီလေးဟေ့ကောင်….ဗျာ… ဘာလို့ မင်းအသံတွေက တုန်နေတာလဲဟ ဘယ်လိုလဲ ငါ့ကောင်မလေး စောက်ပတ်က လှလားဟုတ် ..အကို မင်း ကလဲ ရဲရဲ တင်းတင်း ပြောစမ်းပါ .. လှ လို့ လှတယ် ပြောတာ ရှက်စရာမှ မဟုတ်တာဟုတ်အကို
အကို့ ကောင်မလေး ရဲ့ စောက်ပတ် က အရမ်းလှတယ် အကို အမွှေးလဲ မရှိဘူး ဖေါင်းပြီးတင်းနေတာပဲ… လုပ်လို့ တော်တော်ကောင်းမဲ့ပုံပဲ…(အဲလို ပြောစေချင်တာမလား..ပြီးရော)အေးကွာ အဲလိုပြောစမ်းပါကွာဟေ့ မင်းရှင်းပြီးရင် ဖယ်တော့ဟုတ်အမ…. ကိုထွန်း သက်မွန် Restroom သုံးဦးမယ်…အင်းသွားလေ… ဘယ်လိုလဲ ညီ .. မင့်အမ ဖင်လုံးလေးတွေ ကော… မိုက်လားသက်မွန်လဲ ကိုယ်လဲ အထ ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ ဆိုတော့ တာဝါလဲ ရေချိးခန်းမှာ မယူထားတော့ အဲလိုလဲ အပြောခံရတော့ စောက်ဖုတ်ထဲတောင် ကျင်သလိုကြီး တစ်ယောက်က အမြဲတမ်း လိုးနေကျ ကျေးဇူးရှင် လူ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ဟိုတယ် ဝန်ထမ်းဆိုတော့ … တစ်ခါမှလဲ အဲလို မပြောခံဘူးတော့ ..ရှက်လဲ ရှက်ရှက်နဲ့ရေချိုးခန်းထဲ သွက်သွက်လေး ဝင်ပြီး ရေပန်းကို ဖွင့်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံး ကို ရေနွေးနွေးနဲ့စိမ်ချိုးပြီး တော်တော်ကြာနေပြီးမှ ထွက်မယ် စိတ်ကူးလိုက်တယ် ဒါမှလဲ ဟိုကောင်လေးလဲ ပြန် ပြီးမှ ကိုထွန်းကို စိတ်ကောက်ရမယ်… ပိုက်ဆံကလဲ လိုနေပြီလေ.. ဒီနေ့ ပေးမယ် ပြောထားတယ် ကလေးတစ်ယောက် စရိတ်နဲ့ညီမ ဆရာဝန်ဖြစ်အောင် လိုက်လျော ပေးလိုက်ရတဲ့ အရာတွေ ဘဝမှာ တော်တော် များနေပြီ..ယောင်္ကျားလဲ မသိအောင် အသုံးစရိတ်တွေလဲ တော်တော်လေး.. ရုန်းကန်နေရသေးတယ်..ကဲထိုင်ပါဦးဟ မင်းက အလုပ်ရှိသေးလို့ လားမရှိပါဘူး… ကျွန်တော်ဒီနေ့ မှ နားတာ အကို အခုလဲ အိပ်နေရင်း အကိုခေါ်လို့ ထလာတာမင်းကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ မေးမယ် မင်းစားချင်လား ငါ့ ဇယားလေးကို ဟာအကို ကလဲ မကောင်းပါဘူး… မလုပ်ပါနဲ့ မကောင်းလို့ ပဲ မင်းခုနကတောင် ငါ့ ကောင်မလေးရဲ့ စောက်ပတ်တောင် သေချာကြည့်ထားသေးတာပဲ ကိုင်တောင် ကိုင်သေးတာပဲ ဟာ အဲဒါကတော့ အကို ပဲ ကိုင်ခိုင်းပြီးတော့ထားပါတော့ ငါက လိုးခိုင်းရင် မင်းလိုးမလား… အကိုကလဲ ဘယ်သူက အမလို အမိုက်စားလေးကို မလုပ်ချင်ပဲ နေပါ့မလဲ ဒါဆို လုပ်ချင်တယ်ပေါ့ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ အကိုရာ မင်းက အဖြစ်ကော ရှိပါ့မလား ငါပေးလိုးရင်တောင် ငါ့ကောင်မလေး စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်အောင် လိုးပေးနိုင့်ပါ့မလားဘယ်ပြောကောင်းပါ့မလဲ အကို ရာ ညတိုင်း စော်ချနေတာပါ အကိုရာ.. စော်ကြည်အောင်တောင် ဂေါ်လီတောင် ပတ်ပတ်လည် ထည့်ထားတာ…မင်းက ရုပ်လေးကြည့်တော့ ထင်တောင် မထင်ရဘူး.. ဂေါ်လီတွေ ဘာတွေနဲ့ ပါလားးအကိုကလဲ အရက်လေးသောက်ပြီးလိုးတောင် အကို့ စော်.. အသာလေး နာရီဝက်မကအောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်မှလဲ လုပ်ပါ မောင်ကာလုရယ် တကယ်ပြောတာ အကို ……..အကို့ စော် ကောင်းလွန်းလို့အော်နေစေ၇မယ် မင်းပြောတော့ မင်းစကားပေါ့ အဲတော့ မင်းလိုး တကယ် ကောင်းအောင်ဆော်ပေးနိုင်ရင်… မုန့် ဖိုးပါ ပေးမယ်အများကြီး
ပေးမယ်..(အဲလိုကောင်လေးကို စိတ်ကို ဆွပေးမှ သက်မွန်ကိုတကယ်တီးမှာ အဲဒါမှ အောကားထက်ကောင်းတာကို ကြည့်ရမှာ …အဲလို လုပ်ချင်နေတာကြာပြီ)အကို သေချာရင် ပြီးတာပဲ အမကို ချနေတုန်း အကို ကကြည့်နေမှာလားအေးပေါ့ကွ.. အဲလို ချတာကြည့်ချင်လို့ လဲ မင်းကို ချခိုင်းတာပေါ့ကွ…….အမကကော…သဘောမတူရင်..အော်ဟစ်လိုက်ရင်.. ကျွန်တော်ထောင်ကျမှာပေါ့ဟေ့ကောင် … ဒီကောင်မကို ငါပိုင်တယ်..ရော့ ခွက်ထဲကိုယ့်ဖာသာ ထည့်သောက်… မူးပြီးမှောက်သွား၇င်တော့ မင်းကို ငါ ဖင်ပြန်ချမယ်မလုပ်ပါနဲ့အကို အရက်က ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ချရတာလောက် ကျွန်တော် မကြိုက်ပါဘူးအေး
မင်းမချခင် ငါ့စော်ထွက်လာရင် မင်း မချခင် ရေချိုးလိုက်ဦး… သူက အသန့် ကြိုက်တယ် ပြီးတော့ ကွိုင်လဲ ယူထားဦး.. ဒီတိုင်းတော့ ငါပေးမချဘူး…ေ၇ချိုးပြီး… ကွိုင်ယူပြီး ပြန်လာခဲ့ ခုသွားတော့ဟုတ်အကို…. ကျွန်တော် ခဏနေ ပြန်လာခဲ့မယ် အေး တံခါးခေါက်လိုက် ဘီယာ နှစ်လုံးလောက်ပါ ထပ်ယူလာခဲ့
ဒေါက်.. ဒေါက်.. ဒေါက်..အေး ဝင်လာခဲ့…ကွာ သက်မွန့် ကတော့ ရေချိုးခန်းထဲမှာပဲ ရှိနေတုန်းပဲ မငိးအမတော့ သန့် ရှင်းေ၇း လုပ်နေတယ်.. ပြီးတော့ မင်းမှုတ်လို့ ရတာပေါ့ အာ.. အကိုကလဲ ဘာလဲ မင်းမမှုတ်ဘူးလား ကျွန်တော်က မမှုတ်ဘူး တန်းလိုးတာ … လီးပြပြီးတော့ကို တန်းလိုးတာ ကျွန်တော့်လီးမြင်တာနဲ့ စောက်ရည်ထွက်တယ်ဟုတ်ပါ့မလား ငါ့ကောင်ရာအကို ကြည့်ကြည့်လေအေးဒါဆိုလဲ သက်မွန့် ကို သွားခေါ်တော့မယ်..ဒေါက်ဒေါက်.. သက်မွန် ပြီးပြီလားအင်း ကိုထွန်းပြီးပြီ..လာတော့ ကြာနေပြီ အအေးပတ်တော့မှာပဲလာပြီ ဆိုမှပဲဘယ်လို ဖြစ်နေလဲမသိပါဘူးး တကယ်တာဝါနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဝက်လောက် လုံအောင်ပတ်ပြီး ရေချိုးခန်းက ထွက်လိုက်တော့ အခန်းထဲမှာ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီတစ်ထည်ပဲ ဝတ်ထားတဲ့ကောင်လေးကို .. ခုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး ကိုထွန်းနဲ့ စကားပြောတာ တွေ့ ရတယ် အောင်မာ ကို ထွန်း က အလိုလိုက်လို့ အရက်ခွက်ကိုပါ ကိုင်ပြီးသောက်နေသေးတယ်ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်နေတာလဲ ဘာလို့WAITER ကောင်လေးကို အဲလို ခုတင်ပေါ်ထိုင်ခိုင်းရတာလဲ သက်မွန်လာ… ရော့သောက် မသောက်ချင်ပါဘူးးးး ဘာတွေ ဖြစ်နေတာလဲ ရော့ပါ သောက်ဆိုသောက် အရက်နဲ့ ကျွဲရိုင်း ရောပေးထားတယ်..ပြီးတော့ အစားလေးနည်းနည်းလဲစားဦးဘာတွေမှန်းလဲ
မသိဘူး မကောင်းတဲ့ အငွေ့ အသက်တွေတော့ ရနေတယ်..ဘုရားဘုရား ဟိုကောင်လေးကိုများ ငါ့ကို လုပ်ခိုင်းမှာတော့ မဟုတ်လောက်ဘူး ထင်တာပဲ .. ဒါဆို ဘာလို့ ဘာလို့ဟိုကောင်လေးက အဝတ်အစားတွေ ချွတ်ထားတာလဲ … ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် အ၇က်သာက်ပစ်မယ်.. ပေးးButtom ‘s up သောက်လိုက်တယ် ရင်ထဲမှာ ပူဆင်းသွားတာပဲ.. ကြက်သားဖတ် သုံးလေးဖတ်လောက် ဝါးပလိုက်တယ်… သွေးတွေတောင်ပူတယ်…နောက်တစ်ခွက်ပေး..လုပ်လှချည်လား.. သက်မွန်ရယ်.. ဖြည်းဖြည်းပေါ့ဖြည်းဖြည်းတွေဘာတွေ မသိချင်ဘူး… မူးတာပဲကောင်းတယ်အေးချကွာ ..ရော့ မင်းအမကို စပ်ပေးလိုက်…. ပျော့ပျော့လေးစပ်…နောက်တစ်ခွက်လဲ အရင်တစ်ခွက်လိုပဲ သောက်ချလိုက်တာ.. လူလဲ ကောင်းသွားတော့တာပဲကောင်လေးစတော့လေ….ကောင်လေးကို ပေါင်သားလေးတွေကို လာကိုင်တယ်….ဖေါင်း..လက်ကို ပုတ်ချလိုက်တယ်..သက်မွန် အကို သက်မွန်နဲ့ ကောင်လေး လိုးတာကြည့်ချင်တယ်ကိုထွန်းက လူကို ဘယ်လို မှတ်နေလဲ… ဖာသည် မဟုတ်ဘူးနော် လူတကာနဲ့ အလုပ်ခံတဲ့ ကောင်မ မဟုတ်ဘူးနော် ဖာသည်
မဟုတ်လို့ လဲ ကြေးကြီးကြီး ပေးပြီး ဝယ်ထားတာလေ မင်းကို ငါပိုင်တယ် မင်းယောကျာင်္းက အိမ်မှာ မင်းကို ပိုင်ပေမယ့် ဒီအခန်းထဲမှာတော့ ငါပိုင်တယ်အဲလို ပြောပြီး လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့ မရဘူးလေရတာပေါ့ မင်းနဲ့ ငါ သဘောတူညီမှုတစ်ခုရှိတယ်လေ.. ငါ ကျေနပ်မယ်ဆို မင်း ဘာမဆို လိုက်လျောမယ်ဆိုအဲဒါက ဒါတွေ မပါဘူးလေ ..ပြောခဲ့လို့ လား.. ဘာမဆိုလေ….ဟာာာာ မသိတော့ဘူးကွာ ရှင်က လူကို တန်ဖိုးမထားဘူး…တန်ဖိုးထားလို့အခုလို ဟိုတယ်မှာ လုပ်တာလေ တန်ဖိုးမထားရင် လမ်းဘေးမှာ လုပ်မှာပေါ့ လုပ်ဟာာ မသိတော့ဘူး… လုပ်ချင်တာသာလုပ်တော့ နောက် ဘယ်တော့မှ လာမတွေ့ တော့ဘူး…..အခုတော့ လိုးခံလိုက်ဦး….ရှင်ကြည့်ချင်တယ် မလား ကြည့် ..ကြည့် နှမသားချင်းကိုယ်ချင်းမစာတဲ့လူကြီးကောင်လေး စတော့လေကွာ မင်းကလဲ လိုးချင်တာလဲ တစ်ပိုင်းကိုသေလို့လိုးပါတော့ဆိုမှဟုတ်..သက်မွန်ဆိုတဲ့အမရဲ့ ပေါင်လေးတွေ ကိုင်တော့ အမက ပက်လက်လှန်ချပြီး ခေါင်းအုန်းကို မျက်နှာပေါ်အပ်ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်လဲ ဘယ်ရမလဲ တာဝါကို ဆွဲခွါ ချပြီးတော့ နို့ သီးလေးတွေကို ကိုင်ကြည့်လိုက်တယ် တင်းနေတုန်းပဲ ခေါင်းလေးတွေက ထောင်လာတယ် တစ်ချက်လောက်.. အားရပါးရ စုံကိုင်ပြီးတော့ အားရပါးရ ညှစ်လိုက်တယ် အားးးး ခေါင်းအုန်းအောက်က အော်သံလေးက လုံးပြီးထွက်လာတယ် ဟိုဘဲကြီးတော့ အောကားကြည့်သလိုကို သေချာထိုင်ကြည့်နေတာ သေချာ လိုးရမယ် အလကားရတာ… ပစ္စည်းကောင်းလေးတွေ.. တစ်ခါတစ်လေမှ စားရတာ စားနေကျ ဖာသည်မတွေလို မဟုတ်ဘူး..ပေါင်လေးကို အသာဟပြီး ကြည့်လိုက်တော့ လီးက လဲ အလိုက်တသိနဲ့ခုနက မပျော့မမာ ဖြစ်နေတဲ့ ပုံစံကနေပြီး တန်းပြီး မတ်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ် အချိန် ဆွဲနေလို့ မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ ပါလာတဲ့ ကွန်ဒုံးကို စားပွဲပေါ်ကလှမ်းယူလိုက်တယ် ကွန်းဒုံးကလဲ
အကောင်းစားဆိုတော့ Tiger Type လေ.. အဖုလေးတွေလဲ ပါတယ် ကျွန်တော်ဒုတ်မှာလဲ ဂေါ်လီက ထည့်ထားတာ.. ခြောက်လုံး တိုက်လုံး ခိုက်လုံး မိုက်လုံး ဆိုပြီး နှစ်လုံးစီထည့်ထားတာ.. … နောက်ဆုံးအလုံးက ထည့်ထားတာ… နှစ်ပါတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ် ဖာတွေဆိုတာ…အရင် ၅လုံးလောက် ထည့်ထားတာတောင် လီးထည့်လိုက်ရင် တွန့် တွန့် သွားတာ….. အခုစော်ကြီးကော ဘာခံနိုင်မှာ မို့ လဲ ကောင်းကောင်းလေးလိုးပြစ်မယ်ဆိုပြီး… ကွန်ဒုံးကို စွပ်လိုက်တယ်ပေါင်ကြားထဲကို ဒူးနှစ်ဖက်နဲ့ ဝင်တော့ ခြေထောက်တွေက သိပ် အများကြီး မဟုတ်ပေမယ့်ကားတော့ ကားပေးတယ်..လီးကို အသာကိုင်ပြီး…. စောက်ဖုတ်ဝကိုတေ့ ပေးလိုက်တော့ ..အင့်…..Waiter ကောင်လေးကတော့ စောက်ဖုတ်ကို..လာတေ့တော့ တမျိုးကြီးပဲ…..လန့် တာလဲပါတယ်ကွန်ဒုံးကောပါရဲ့လားဆိုပြီး..လက်ကို ပေါင်ကြားထဲနေ စမ်းမယ်လုပ်တော့ဘာမှ စိတ်မပုနဲ့ကွန်ဒုံးပါတယ်… (ကိုထွန်းက သက်မွန်စိတ်ကို သိနေသလိုနဲ့ပြောလိုက်တယ်)ကျွန်တော်လဲ သူ့ လက်မရောက်ခင်မှာပဲ လူကို ခပ်ကွကွလုပ်…ပေါင်ကိုကားအောင်လုပ်ပြီးစောက်ဖုတ်ဝကို ဖိချလိုက်တော့…ဟာာ.. မင်းကလဲ လီးတောင် ဝင်အောင် မထည့်တတ်ဘူးလားသူ့ လီးက ဘယ်လိုကြီးလဲ ချောချောကြီးလဲ မဟုတ်ပါလားးးးအားးးး ဝင်လာပြီ… သူ့ ဒစ်ကြီးဝင်လာပြီ…..ပုံမှန်ပါပဲ…အားးးးး နာတယ်… အထစ်ထစ်တွေနဲ့ဘယ်လိုကြီးပါလိမ့် ဂေါ်လီတွေထည့်ထားတာလား မသိဘူးအားးးး ဝင်လာပြီနော်….. တစ်မျိုးကြီးပဲ အတွင်းသားတွေ လိပ်ဝင်သွားတယ် …နောက်တစ်ထစ်လာပြန်ပြီ နာတယ် …. အစိကို ထွသွားပြီ ……..အားးးး အဆုံးထိဝင်လာပြီ…… နောက် စောက်ပတ်နားမှာ… နောက် တစ်ခေါက် အလုံးကြီးနဲ့ သေချာတယ် ဂေါ်လီပါတဲ့ လီးနဲ့အလိုးခံရပြီ….ပြန်ဆွဲထုတ်မလို လုပ်တယ် မလုပ်ပါနဲ့ ….မောင်လေး နေပါဦး မထုတ်ပါနဲ့ ဦး… ခဏလောက် နေဦးနော် ဘာလဲ ကျွန်တော့်လီးကို အမ စောက်ပတ်ထဲမှာ စိမ်ထားပေးရမှာလား….ဟုတ်တယ်ဟာ.. အခုမှလဲ တွေ့ သေးတယ် စကားလုံးသုံးတာ ရိုင်းလိုက်တာ..သက်မွန် စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ခေါင်းအုံးဖယ်ပြီး…ကောင်လေး မျက်နှာကိုကြည့်တော့ စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့ ..မုန်းဖို့ ကောင်းလိုက်တာ…မမ..ဘာလဲ..ကျွန်တော်လဲ အသည်းယားဖို့ ကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးကြောင့် ခေါင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ငြိမ်အောင်ကိုင်ပြီးKissing ဆွဲပလိုက်တယ်မလုပ်….အွန်းးးးးးးးးးးး ပြွတ်..အားရပါးရ နုတ်ခမ်းတွေကို မလွတ်တမ်း နမ်းပလိုက်တယ် နုတ်ခမ်းတွေက ..တော်တော် ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ် သူ့ ရဲ့ စောက်ပတ်လေးတွေလိုပါ ပါးပါးလေးနဲ့လီးကို တစ်ဝက်လောက်… ဖင်ကြွပြီး ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ ပြန်ပြီး အဆုံးထိ ပြန်ထည့်လိုက်တယ် နုတ်ခမ်းသားလေးတွေ လိပ်ပြီး ပါလာတယ်အဲလို …….လေး ငါးချက်လောက် လုပ်ပေးလိုက်တယ်….လီးကို ဆွဲထုတ်မယ့် အချိန်တွေ ကျတော့ စောက်ဖုတ်သားကို ညှစ်ပြီး ထွက်မသွားအောင် လုပ်ပေးတာကို တော်တော် သဘောကျတယ်ကောင်းတယ် အကို အကို့ စော် အရမ်းလိုးလို့ ကောင်းတာပဲ…အင့်..ဘာတွေ လျှောက်ပြောနေတာလဲ….လိုးကောင်းလို့ ကောင်းတယ်ပြောတာ အမကလဲ…. ပတ် ပတ်.. စွိ…….ဖေါင်းအားးး ဖြည်းဖြည်းလုပ်နာတယ်… ထိတယ်ကွာ…. အကုန်လုံးထုတ်ပြီး… အဆုံးထိတစ်ချက်ချင်းစီပြန်ထည့်ပေးဒီလိုမျိုးလားးးဟုတ်တယ်..ကောင်းတယ်….လုပ်ပေးပါဦး ကိုထွန်း ကျေးဇူးပဲ………..ပြီးပြီ….ပြီးပြီ…ထွကိကုန်ပြီ…ကျွန်တော် မပြီးသေးဘူး……..ခဏလေးနော် ဒီအတိုင်းလေးစိမ်ထား….အင်းးးးးး(တကယ်ညှစ်တဲ့ စောက်ပတ်ကွာ)ကိုထွန်းက ထလာပြီး မောင်လွင့်ရဲ့ နားနားကပ်..ပြီး တိုးတိုးပြောလိုက်တယ်…မောင်လွင်က အံသြတဲ့ အမှုအရာနဲ့ ကိုထွန်းကိ်ုကြည့်တော့… ကိုထွန်းက ရတယ် ..လုပ်သာလုပ်ဆိုပြီး ပြောတော့….. မောင်လွင့်မျက်လုံးတွေ အရောင်တောက်သွားတယ်အမလာဆိုပြီး ခဏနားပြီးတော့….. သက်မွန်ကို ဆွဲထူလိုက်တယ်…ခုတင်စောင်းလေးကို ခေါ်ပြီး ခြေထောက်တွဲလွဲကျနေတဲ့ပုံ ကို လုပ်ယူလိုက်တယ်…သက်မွန်လဲ တော်တော်တော့ ပြိုင်းနေပြီ… ကိုထွန်းချထားတာရယ်…. ကောင်လေးက မပြီးသေးပေမယ့်ဂေါ်လီနဲ့ လုပ်ထားတော့ နည်းနည်းလဲ နုန်းနေတယ်…မြန်မြန်လုပ်….ရုတ်တရက်… မောင်လွင်က ဒူးထောက်ချပြီး…. ဖင်ကြားနဲ့ စောက်ပတ်ကို လျှာနဲ့ အားရပါးရ လျှာနဲ့ လျှက်လိုက်တော့ ခြေဖဝါးလေးတွေ ကော့ပြီးတော့…. ခေါင်းလေးပါ မော့သွားတဲ့ မသက်မွန်ရဲ့ တုံ့ ပြန်မှုလေးကို တွေ့ လိုက်ရတယ် လျှာနဲ့ လျှက်နေရင်းကနေ ဖင်ကြားထဲနဲ့ဖင်ဝကို တံတွေးတွေ ၇ွှဲနေအောင် မသိမသာလေး လုပ်နေလိုက်တယ်ပြီးတော့
ဖင်ကြားထိပ်ပေါ်ကနေ ..ပြီးတော့ တံတွေးကို ပြစ်ကနဲ နေအောင် ဖြည်းဖြည်းချင်းထွေးတင်ပေးလိုက်တော့ … တံတွေးလုံးက စီးစီးလေးနဲ့ဖင်ကုန်းနေတဲ့ အနေအထားမှာတံတွေးလေးကျနေတာ သေချာကြည့်တော့ ဖင်ဝလေးလဲရောက်ရော လက်ချောင်းလေးနဲ့သေချာ ဖမ်းပြီးဖင်ဝလေးမှာ ဝှိုက်ပြီး သုတ်ပေးလိုက်တယ် ပြီးတော့ ကော့ တောင်နေတဲ့ လီးပေါ်ကို …တံတွေးတစ်ချက်လက်ဝါးလေးပေါ် တင်ပြီးလီးကို ထိပ်နားလေးကို သုတ်လိမ်းပြီးတော့ မသက်မွန်ရဲ့ ခါးကို လက်တစ်ဖက်ကိုင် ပြီးတော့ ဖင်ဝကို တေ့ပြီး စိုက်သွင်းချလိုက်တယ် အားးးးး နားတယ် မလုပ်ပါနဲ့ဖင်ကို မလုပ်ပါနဲ့….ကျန်တာအကုန်ပေးပြီးပြီးပြီပဲ မုန်းလိုက်တာ..ကိုထွန်းကြောင့်ပေါ့ ဖင်က အခုထိ အိမ်သာသွားရင် နာနေတုန်းပဲ ဟို မသာကောင်လေးကလဲ လိုးလိုက်တာ.....အလကားရတဲ့စောက်ပတ်ဆိုပြီးလုပ်တာ ..လူသာငယ်တယ် လီးကလဲ မဟုတ်တာတွေ လုပ်ထားတော့ နာလိုက်တာလဲ မပြောပါနဲ့ ကောင်းတယ်ဆိုတာ ခဏရယ် ပြီးတော့လဲ ခံစားရတာ မသက်သာဘူးလူလဲ ဖာသည်ဖြစ်နေပြီ...ကိုထွန်းလုပ်ပေါက် က လူကို လူလို မြင်တာမဟုတ်ဘူးညီမလေး.....မွန်..မမ နေမကောင်းဘူးဆို ...ဘာဖြစ်လို့ လဲ လာလာ အိပ်ခန်းထဲလာ မမပြောမယ်..နင့်ယောက်ကျားလဲ သွားမပြောနဲ့ နော် ပြီးတော့နင့်အကိုလဲ မသိစေနဲ့ကြားလားဘာဖြစ်လို့ လဲ မမ၇ဲ့ညီအမ နှစ်ယောက်ထဲ ရှိတာ ပြောစရာလားအေး..အဲဒါတွေလဲ နင့်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်တာဟင် မမဖာသာ နေမကောင်းဖြစ်တာနဲ့ ပဲ မွန် နဲ့ ဆိုင်လို့ လားလို့ ဘာလဲ ဒီရက်ပိုင်း မွန့် မလာလို့ တော့ သတိရပြီး နေမကောင်းဖြစ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုကြီးမ ရှိ်လို့ လွမ်းဖျားလွမ်းနာ ကျနေတာ မလားတော်ပြီ နင့်အကို မရှိလဲ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးတံခါးသာပိတ်လိုက်ပါ...ဓါတ်မီးက ဒီမှာ...နင့်ကိုကြည့်ခိုင်းမလို့အနာများဖြစ်နေလားဆိုပြီးစပ်နေလို့၂ရက်လောက်တော့ ၇ှိပြီသက်မွန်လဲ ခုတင်ပေါ်ကို မှာ မှောက်ခုံလုပ်ပြီး အတွင်းခံမ၀တ်ထားတဲ့ ဂါဝန်ကို မပြီးဖင်ပေါ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်နင်ဆရာဝန် ဖြစ်ပြီဆိုတော့ ဒီဟာလောက်တော့ ကြည့်ရမှာပါ မမက ဘာပြမှာလဲ ဖင်ဝကို ကြည့်ပေးစမ်းပါ ကွဲသွားလားလို့ အော်..အားးးးဖြည်းဖြည်းသက်သာဖြဲပါဟဲ့နာရတဲ့အထဲ ဟင်းဟင်းနည်းနည်းပါ မမရဲ့ ဘာဖြစ်လို့ လဲ နောက်တစ်ရက် နှစ်ရက်ဆို ပျောက်သွားမှာပေ့ါ ဘာမှ မဖြစ်လဲ ပြီးတာပဲ ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ ၀မ်းချုပ်ရင်းနဲ့ ကွဲသွားတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး မမက ငယ်ငယ်ထဲက ၀မ်းမှန်တာပဲ မဟုတ်ဘူးဟေ့ anal sex လုပ်တာထင်သားပဲ မမက ဂျယ် ကို သုံးလေနေပါဦး ကိုကြီးက မရှိတာ ကြာပြီ အခုမမဟာက သိပ်မကြာသေးသလိုပဲ အေး အစကတော့ မပြောပဲ နေမလို့ ပဲ အခုတော့ ဖင်ထဲမှာလဲ နာတယ် ပြီးတော့ နင့်မှ မပြောရင်လဲ ငါတစ်ယောက်ထဲဆိုလဲ အကြာကြီး ခံစားပြီးတော့ မနေနိုင်တော့ဘူး..
မမရယ် မမ ဘ၀နဲ့ရင်းပြီးတော့ ညီမလေးကို ကျောင်းထားခဲ့တာ သိရတော့ ညီမလေးက ဘယ်လို ဆက်ပြီး နေရမှာလဲ နေပါဦး ကိုကြီးတော့ လုံးဝတော့ မသိပါဘူးနော်ဟဲ့ သိစရာလား သူသိရင် နင်ကော ငါကော နှစ်ယောက်လုံးကို သတ်ပြစ်မှာပေါ့ မမရယ် ဒါနဲ့ များ ညီမလေးကို အစထဲကပြောရောပေါ့ နင့်ပြောလဲ ကျောင်းတတ်နေတဲ့ ငါ့ညီမလေး စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရုံပဲ ရှိမှာပေါ့ မေမေတို့ က အိမ်ပဲ ကျန်တာလေ အဲဒါလေးရှိတော့ သိပ်မသိသာဘူး နင့်အကို ကလဲ နင်တတ်နေတဲ့ ဆေးကျောင်းက မိဘတွေ ကျန်တဲ့ ငွေနဲ့ တတ်နေတယ်ပဲ သိထားတာသြော်...မွန်မွန် တိုးတိ်ုးလေးငြီးပြီး မျက်ရည်တွေဝဲ ပြီး ညီအမနှစ်ယောက် ဖက်ထားမိတယ်အခုကိုထွန်းက နင့်ကို တွေ့ ချင်လို့ တဲ့ ဟင်..ဘာဖြစ်လို့ လဲ ...ငါထင်တာတော့ သူလဲ ငါ့ကိုလုပ်သလို နင်ကို လဲ ဖြစ်ချင်တယ်ပြောတယ်ငါလဲ ခါးခါးသီးသီး ငြင်းတာပေါ့ ငါ့ညီမလေးကို ပညာတတ်စေချင်လို့ငါပဲ အနစ်နာခံတာ နင့်ကိုတော့ မရဘူးမွန် ခဏတော့ ငြိမ်သက်မိသွားတယ်ဦးနှောဏ်ကလဲ စဉ်းစားရသေးတယ် တော်ကြာ မမတို့ အိမ်ထောင်ရေးကို ထိခိုက်အောင် ဟိုလူကလုပ်လိုက်ရင်လဲ ဒုက္ခအခုလို အသက်အရွယ်ရောက်လာတော့ စဉ်းစားတတ်လာပြီလေ အဲလို လူတွေ က သူတို့ လိုချင်တာရတဲ့ အချိန်မှာ ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် လိုချင်တာမရရင် အကြပ်ကိုင်တတ်တယ် ဆိုတာလူတွေ အကြောင်းကို သိနေပြီလေကိုယ်ကလဲ ခံထားရပြီးပြီလေ မမသာမသိတာရယ် အပျို ဘ၀ထဲက ဖြစ်ခဲ့တာတွေက အရိပ်လို ဖြစ်နေတယ်အရိပ်ဆိုတာ ကိုယ်သွားသလာက် လိုက်နေတတ်တာရယ် မလိုက်စေချင်လဲ အမှောင်ထဲမှာ နေရမှာ တစ်ဘ၀လုံး.....ကိုယ်ပြုတဲ့ကံက ပြန်လာတတ်တယ် မဟုတ်လားကြက်သွန်ဖြူလိုလေ....နည်းနည်းစားလဲ...........................ညီမလေးကို ကြည့်လိုက်တော့ တစ်ခုခုကို စဉ်းစားနေသလိုပဲ ........ညီမလေး နင်ဘာတွေ စဉ်းစားနေတာလဲ မမ ညီမလေး မနက်ဖြန်လောက် ဖုန်းဆက်လိုက်မယ် ဘာကိ်ုလဲ ...မမပြောတဲ့ကိစ္စကို စဉ်းစားမလို့...ဘာလဲ ငါ့ညီမလေးလေးက ဖြူ၂စင်၂ လေးကို ....ဘာမှ မစဉ်းစားနဲ့ကိုဖာသာနေ မမကြည့်ရှင်းလိုက်မယ်မမ နေဦး....ညီမလေးပြောပြမယ်....သေချာနားထောင် (နောက်ကြောင်းပြန်သည်။)ငါတို့ ညီအမလဲ အဖြစ်တွေကလဲ ...မမနောင်တတွေ မရနဲ့ တော့ ဖြစ်တာတွေကတော့ ဖြစ်ပြီးနေပြီ ...ဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲ သာ စဉ်းစားတော့ အဲဒီ့ညက.....အ်ိပ်လို့ မပျော်ဘူး...ဆေးရုံမှာ ညဂျူတီကျတယ် ..လူနာကလဲ သိပ်ပြီး မရှိဘူးပြီးတော့ ခွဲစိတ်ထားတဲ့ လူနာနှစ်ယောက်ကလဲ....အေးအေးဆေးဆေး ဆိုတော့ အတွေးတွေက များတယ်ခွင့်လွှတ်ပါတော့ မောင်ရယ် မွန်ဖြူစင်ချင်တာပါ...ညီအမနှစ်ယောက် ချိန်းပြီးတော့ ...မွန့် ရဲ့တိုက်ခန်းမှာပဲ ကိုထွန်းနဲ့ တွေ့ ဖို့ စီစဉ်လိုက်တယ်မောင်ကလဲ နယ်မှာဆိုတော့ ...တော်ကြာ ဟိုတယ်ချိန်းမှ လူတွေ ပိုသိမယ်တိုက်ခန်းဆိုတော့...............သိပ်မသိဘူး လူတကာတက်နေ ဆင်းနေပြုနေတော့ အဆင်ပြေတယ်ရာသီဥတု က မိုးကသည်းနေတယ် ...တိုက်ခန်းတစ်ခုထဲမှာ........၀ရန်တာ တံခါးတွေ ပိတ်ထားတယ် ...ဦးထွန်း..လို့ ပဲ ခေါ်မယ်နော်ရတယ်...ကြိုက်သလိုခေါ်ပါ.......ဘယ်ကစချင်တာလဲ...........အင်း.....(သက်မွန်..ညီမလေးက တော်တော်မိုက်တာပဲ ...... )သက်မွန်နဲ့ က အရင်က ဖြစ်နေတာဆိုတော့ .....သူနဲ့ ပဲ ဦးအရင်စလိုက်မယ်ညီမလေးတို့ လင်မယား အိပ်တဲ့ အခန်းမှာဆိုရင်ကော...ရပါတယ်.....၀င်နှင့်လေ.... ပြီးမှပဲ မွန်ဝင်လာတော့မယ် မမ..ရတယ် နော်အေးပါ ညီမလေးရယ် သက်မွန်ရယ် ကို ထွန်း ရယ် ၀င်မယ်လို့ ထတော့ ခဏ ဦးထွန်း...မွန်မွန်တစ်ယောက် ....၀တ်ထားတဲ့ထမီအနက်ကို အောက်ကနေ...မပြီးတော့ အတွင်းခံကို ချွတ်လိုက်တယ်ပေါင်သားဖွေး၂ လေးတွေ ကို မြင်လိုက်တော့ ကိုထွန်းတစ်ယောက် လီးက မတ်ကနဲ ပဲ ရော့ ဒါကို ရှူပြီး မမကို လုပ်...ဟင်.....ပြီးမှတွေ့ မယ်.....(မျက်နှာကတော့ သခင်မ တစ်ယောက်လိုပဲ )ကိုထွန်း အစကထင်တာတော့ ရှက်နေမယ် ထင်တာ ..အခုတော့ မျက်နှာက...မပြုံးမရယ်နဲ့တစ်ခုခုကို ရင်ဆိုင်တော့မယ် ဆိုပြီး....မျက်နှာပေးရယ် ....နောက်တော့ မဖေါ်ပြတတ်တဲ့ အပြုံးလေး တစ်ခု အတွင်းခံပေးလိုက်တော့ မြင်၇တယ် အတွင်းခံကို လှမ်းယူလိုက်တော့ ..........သက်မွန်တစ်ယောက်ကြောင် ပြီးကြည့်လို့ငါ့ညီမ တစ်ယောက် ဘယ်လို တွေ ဖြစ်နေပါလိမ့်လို့ တော့ စဉ်းစားမ၇ဖြစ်နေတယ် ရှူကြည့်လေ .....PH care 5.5 သုံးထားတာ ခရမ်းရောင်လေနောက်ဆို...မ၇ှူ ရရင်တောင် ဆိုင်မှာ ၀ယ်ပြီး မှန်းရှူလို့ ရအောင်ပြောပြတာ....အခန်းထဲရောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်းတော့ ကိုထွန်းကမဟုတ်တော့ဘူးသက်မွန်ကို အတင်းကို ခုတင်ပေါ်ဆွဲ တွန်း...ထမီကိုလဲ ဆွဲချွတ် ပြီးတော့ ....အတွင်းခံလေးကို ချွတ်ပြီး ဘာမှမလုပ်သေးပဲ ...အတွင်းခံ နှစ်ခုလုံးကို တစ်လှည့်စီ ရှုကြည့်နေတယ်ပြီးတော့ သူ့ အ၀တ်အစားတွေ ကို ခပ်မြန်မြန်ချွတ်ပြီး.........ခုတင်ပေါ်ကို တက်...သက်မွန်...မျက်နှာပေါ် ခွထိုင်ပေးနော် အောက်ကနေ လျှက်ချင်တယ်ပြောတော့သက်မွန်မှာ ရင်ထဲမှာ ရင်ခုန်သံတွေ မြန်လာတယ် သူ့ အပေါ်တက်ခွလိုက်တော့ ....လျှာကြီးက တစ်ခါတည်းကိုလျှက်တော့တာပဲ ဖင်ဝနဲ့စောက်ပတ်ဝမှာဆို ကိုထွန်းတံတွေးတွေကော..သက်မွန်စောက်ရည်တွေဆိုတာ....ရွှဲနေတာပဲ.....အဲဒီ အချိန်..ကိုထွန်းက.....position ပြောင်းပြီးတော့ ........သက်မွန်ကို ခုတင်စောင်းကို ဆွဲ...အတွင်းခံတွေကို သူ့ ခေါင်း မှာ တစ်ခုချင်းစီ စွပ်ပြီး....သက်မွန်.....စောက်ပတ်ဝကို တေ့ပြီး....လီးထိုးသွင်းမယ် အလုပ်....ဖြောင်း.........အားးးး နာလိုက်တာ....ဖင်ကို အနောက်ကနေ အရိုက်ခံလိုက်ရတယ် တော်တော်နာတယ်နောက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ .......အ၀တ်အစား မ၀တ်ထားတဲ့ ချစ်စရာကောင်မလေးကမျက်နှာတည်တည်နဲ့ .... လက်ထဲမှာလဲ ....ယောင်္ကျားဝတ် ခါးပတ်တစ်ခုလဲ ပါရဲ့မလိုးနဲ့ ဦး ဒီဟာကိုကော...လာလျှာပေး ကိုထွန်းကတော့ ကြောင်ပြီး...ကုန်းကုန်းကြီးဖြစ်နေတော့...ဖြောင်း.....ဖြောင်း...အားးးးးး...လာလျှက်လို့ ပြောနေတယ်လေ မကြားဘူးလားးးကိုထွန်းလဲ ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေတုန်း...မွန်မွန်ဆိုတဲ့ကောင်မလေး ဆီကို သွားမယ်လုပ်တော့ဒီအတိုင်းမလာနဲ့ဒူးထောက်ပြီးလာ.....ခုတင်နဲ့ မွန်မွန် မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့နေရာက ခြေနှစ်လှမ်းစာလောက်ပဲ ဝေးတာ...ကိုထွန်း စိတ်ထဲမှာ ..ဘယ်လို ဖြစ်သွားမှန်း မသိဘူး ခုနက အတွင်းခံရှူခိုင်းပြီးထဲကလူဆိုတာ အ၇င်တုန်းက ထွန်းနိုင် မဟုတ်တော့သလိုပဲ...အဲကောင်မလေးရဲ့မျက်နှာကို ကြည့်လိုက်ရင် မလွန်ဆန် နိုင်သလိုဖြစ်နေတယ်...ဒူးထောက်ပြီး သွားတော့.....ဖြောင်း....တော်တော် စောက်ပတ်လျှက်ချင်တယ် ဟုတ်လား..အေးး ....လို့ တိုးတိုးပြောမိတယ်ဖြောင်း.....အားးးး...မွန်မွန်...က နောက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဆုတ်ပြီး လျှောက်တော့ ကိုထွန်းက လေးဖက်ထောက်ပြီး...လိုက်နေတယ်သက်မွန်ကတော့......စောက်ပတ်ထဲမှာ...အရည်တွေစိုလာတယ်ကြည့်လေ ကို့ ကို သူများတဲ့ လိုးခိုင်းတဲ့လူက အတွင်းခံကို ခေါင်းမှာစွပ်ပြီး....ညီမလေး စောက်ပတ်ကို လျှက်ချင်လို့လိုက်နေတဲ့ ပုံက .........စိတ်ထဲမှာလဲ .....ပျော်လာသလိုပဲ........အခန်းထောင့်ကို...မွန်မွန်....ကျော ကပ်မိတော့....နောက်ဆုတ်တာကို ရပ်လိုက်တယ် ကိုထွန်းက အဲနားကို ရောက်တော့....မွန်မွန့် ခြေထောက်တစ်ဖက်က...ဦးထွန်းပုခုံးပေါ် လှမ်းတင်လိုက်တယ်လျှက်လို့ ရပြီ ....လျှက်တော့...ခွင့်ပြူချက်လဲရကော.....ခွေး..တစ်ကောင်လို လျှက်တော့တာပဲ .....တော်တော်ကြာတော့...လာလိုက်ခဲ့.....ခုတင်ပေါ်မှာ....ပက်လက်လှန်ခိုင်းတယ်.....ဒီအတိုင်းနေ..လက်တွေက ဘယ်ကိုမှ မကိုင်နဲ့ ကိုင်ရင် ...မလိုးပေးတော့ဘူး...ခေါင်းပဲငြိမ့် ပြနိုင်တော့တယ် ......မမကို မှုတ်ပေးလိုက်....ခုတင်ပေါ်မှာ...ကိုထွန်းက ပက်လက်လှန်...ပြီး သက်မွန်ကို မှုတ်ပေးနေတယ်...လက်နှစ်ဖက်ကတော့ဘေးမှာ ဆန့် ထားတယ်လက်လှုပ်ရင်..သက်မွန်က ခါးပတ်နဲ့ လှမ်း၇ိုက်တယ်ကိုထွန်းအောက်ပိုင်းမှာတော့.....မွန်၂ က ကိုထွန်းလီးကို အပေါ်ကို လှန်ပြီး စောက်ပတ်နဲ့အပေါ်က ဖိပြီး....ေ၇ှ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်နေတယ်စောက်ပတ်ထဲကိုတော့..မထည့်သေးဘူး.........သိပ်မကြာဘူး..ကိုထွန်းတစ်ယောက်...လရည်တွေ ထွက်လာတော့......မွန်မွန်က.......လရည်ကုန်အောင် စောက်ပတ်နဲ့ ပွတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှ......ဂွေးဥနှစ်လုံးကို ကိုင်ပြီး လျှာနဲ့ လျှက်လိုက်တော့......လီးက...ငေါက်ကနဲ ဖြစ်ပြီး......နောက်တစ်ခေါက်အတွက် အဆင်သင့်ရှိကြောင်းbody language နဲ့ပြလိုက်သလိုပဲ တကယ်တော့ မွန်မွန် တကယ် ကိုထွန်းလီးကို တွေ့ ကထဲ က ခံချင်နေတာလို့ ပြောရင်ကော.........
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်တောင်လာတဲ့ လီးကို ကိုင်ပြီင်္း မွန်မွန်တစ်ယောက် အတွင်းထဲထိရောက်အောင်တစ်ချက်ထဲ ထိုင်ချလိုက်တော့ နောက်တော့ ဖြည်းဖြည်းချင်း အ၀င်အထွက်ကောင်းအောင် တစ်ချက်ချင်း အဆုံးထိ ထုတ်လိုက် ပြန် ထိုင်ချလိုက်နဲ့ ............သက်မွန်ကတော့ သူ့ ကို မှုတ်ဖို့ မေ့နေပြီးတော့ မျက်လုံးမှိတ်ခံစားနေတဲ့ ကိုထွန်း မျက်နှာပေါ်ကနေထပြီင်္းခုတင်ပေါ်ကဆင်းပြီး .........သူ့ ညီမက သူ့ ရဲ့ ဘဲကြီး အပေါ်မှာ လိုးပေးနေတာ ကြည့်ပြီး....မတ်တပ်ရပ်ပြီင်္း..စောက်ဖုတ်နှိုက်နေပါတော့တယ်ညီမလေးပြီးချင်လာပြီထင်တယ်...အသက်ရှူသံတွေ တွေ စိပ်လာတယ်နောက်တော့.....ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ်ကို အားရပါးရ လေးခါလောက်လုပ်လဲ ပြီးရော...သက်ပြင်းတစ်ချက်ချပြီး..ဆတ်ကနဲ ...ကိုထွန်းပေါ်ကနေ ထလိုက်တယ် လီးကြီး ကျွတ်ထွက်သွားတဲ့ အသံက.... ပြွတ်ဆိုပြီးးးးထွက်လာတော့ ကိုထွန်းက မျက်လုံးကြီး ဖွင့်ပြီး...ဟာ.......လို့ အော်ငြီးသံပါ တဆက်တည်း ကြားလိုက်ရတယ်ဒီမှာ မပြီးသေးဘူးလေ...မမနဲ့ ဆက်လုပ်....မွန် ပြီင်္းသွားပြီ.........ကိုထွန်းလဲ ခုတင်ဘေးမှာ ရပ်နေတဲ့ သက်မွန်ကို ဆွဲပြီး........doggy ပုံစံလေးနဲ့မညှာမတာ ..ဆောင့်လိုး.တော့တယ်လီးက ပြီးခါနီးမှ.... ဆွဲထုတ်ခံလိုက်ရတော့ ........အတိုးချပြီး လိုးးခံလိုက်ရတာက ..သက်မွန်.....လိုချင်တာကို ရအောင် ယူသွားတာက မွန်မွန်.....ဘယ်လောက်တောင် ဖီးတွေ တက်နေလဲ မသိဘူး....သက်မွန် စောက်ဖုတ်ထဲ.... ကိုထွန်း...ပန်းထည့်လိုက်တဲ့ အရည်တွေက နည်းနည်းနောနော မှ မဟုတ်တာကိုထွန်း လီးလဲ ဆွဲထုတ်လိုက်ကော.....သက်မွန်လဲ မှောက်ခုံလေး...လဲကျသွားပုံက ခြေပစ်လက်ပစ်...စောက်ဖုတ်ကလဲ ...မနေနိုင်ဘူး ဘူ...ဆိုပြီး လေတွေတောင် အန်ပြီး လရည်တွေ စီးကျလာတယ်ကိုထွန်း....ခုတင်ပေါ်မှာ မောပန်းလွန်းလို့ .....အသက်ရှုတာတောင် မနည်း၇ှုနေရတယ်မွန်မွန်ကတော့ .....ကြံစည်ထားတဲ့ အတိုင်းပဲ....သက်မွန် မှောက်ခုံလေးဖြစ်နေတဲ့ ဖင်ကနေ ထွက်လာတဲ့ လရည်တွေကို ဖင်ကြားလေး နှစ်ခုကို အသာဖြဲပြီး လက်ခလည် ချောင်းလေးနဲ့ ကော်ယူပြီးး........သူ့ ရဲ့ ဖင်ဝလေးမှာ ခပ်ကွကွလေးလုပ်ပြီး ပွတ်..လိုက် ..လက်ချောင်းထိပ်ဖျားလေးတစ်ဆစ်လောက် မြုပ်အောင် ...လရည်တွေ နေအောင်......လုပ်လိုက်တယ်ဒီနည်းတွေက .....ဟိုအကောင် လုပ်တဲ့ နည်းတွေလေ....ဦးထွန်းရသေးလား..... လိုးနိင်သေးလားခဏလောက်တော့ နားချင်သေးတယ်...ဧည့်ခန်းထဲ သွားရအောင်......လာကြကိုထွန်းတို့နှစ်ယောက် လဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တော့ မွန်မွန့် ကို နားမလည်နိုင်တဲ့ သဘော နဲ့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကြည့်မိလိုက်တယ် ....နောက်တော့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ..ထိုင်ပြီးး...မွန်မွန်က.... JD ကို ဖွင့်ပြီး....ရေခဲနဲ့စပ်ပြီင်္း...သုံးယောက်သားထိုင်သောက်နေတုန်း.......ကိုထွန်းလီးကို မွန်မွန် က ဂွင်းကို ဖြည်းဖြည်းချင်း...ထုပေးးနေတယ်ဦးထွန်း....(မျက်နှာကတော့ တည်တည်ပဲ)ဘာလဲ ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ မေးဆတ်ပြလိုက်တော့ဖင်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလိုး..ပေးမလားး...ခေါင်းပဲ ငြိမ့်ပြ လိုက်ရတော့တယ်...မွန်မွန်..လက်ဝါးထဲကို တံတွေးတွေ..ထွေးပြီးတော့.....ဦးထွန်းလီးကို ....ခပ်ဖွဖွလေး ၄ချက် ၅ချက်လောက် ထုပေးလိုက်တယ်သက်မွန်ကတော့ ပွဲကြည့် ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ပေါ့ အခုပွဲမှာ....အလုပ်ခံချင်တာထက်...သူများတွေ လုပ်တာက်ို ကြည့်ချင်စိတ်ပဲ ရှိနေတော့တယ်မွန်...ထရပ်လိုက်တော့....ကိုထွန်းလဲ ထရပ်တယ်...ဆိုဖာရဲ့...နောက်ကြောဖက် နဲ့လက်တင်တဲ့ နေရာ ထောင့်မှာ ခေါင်းမှီတဲ့ နေရာမှာ...ရင်ဘတ် အပ်ချလိုက်တယ်position ကတော့ မတ်တပ်လေးလုပ်လို့အဆင်ပြေတဲ့ပုံ....ဒါပေမယ့် ဖင်လိုးဖို့ ဆိုရင်တော့ ရင်ဘတ်ကလေး ကော့ လိုက်မှပဲ အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာသိတော့ကိုယ်ကို ခပ်ကော့ကော့လေး...ပြန်ပြင်ပြီးးးး..နေပေးလိုက်တယ်မွန့် လက်တစ်ဖက်က..ဆိုဖာကို ကိုင်ပြီး..ဦးထွန်း...မွန့် ဖင်နှစ်ဖက်ကို ဖြဲလိုက်..ကိုထွန်းဆိုတာ ရင်ဘတ်ထဲမှာ ဘုရားပွဲ လှည့်နေတာလေမွန် ကိုထွန်းလီးကိုကိုင်ပြီး နောက်ပြန်ကိုင်ပြီး...ဖင်ဝကို တေ့လိုက်တယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်........မွန်မွန့် ဖင်ဝထဲ...ကိုထွန်းလီး ဖြည်းဖြည်းချင်း ၀င်သွားတယ် ပထမတော့ ဒစ်.....နောက်တော့လဲ အဆုံးထိပေါ့ ပြန်ထုတ်ပေး.....ဒစ်ဖျားထိထုတ်.....အင်း ဟုတ်တယ်....ကိုထွန်းကတော့ ဖင်သားနှစ်ဖက် ဘေးကို ဖြဲထားပြီး...သူ့ လီးကို ...ဖင်ထဲက ဆွဲထုတ်တော့ ခရေ ပွင့်ဖက်လေးတွေ..ကတော့ အောက်ကနေ စူထွက်လာတယ်...အားးး ကောင်းလိုက်တာ...အဲလိုလေးပဲ လုပ်နေ..... ကောင်းတယ် မဆောင့်နဲ့ ကိုထွန်းလဲ...အခုမှ... အရင်တုန်းက သူ့ မိန်းမနဲ့ ပတ်သက်လို့ကိုသက်ပြောတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ကို နားလည်လိုက်တယ်အခုတော့ သက်မွန်တစ်ယောက်တော့ ..Classic Anal Sex ကို live show ကြည့်ရတော့တယ်ညီမလေးကြည့်တော့ နာတဲ့ပုံမပေါက်ပဲ ..အရမ်းကောင်းတယ်ငါ့တုန်းကတော့...ဖင်ပါ ...တော်တော် နာတယ် ကောင်းတာက ခဏ နာတာက တော်တော်ကြာတော့ အခုလိုမျိုးဆ်ိုတော့ လာစမ်းပါစေ....မိနစ် အနည်းငယ်ကြာတော့ ကာမဘုံသားနှစ်ယောက်တော့.....ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ငြီးတွားရင်း....အဆုံးသတ်သွားကြပါတော့တယ်.....ဒီလိုနဲ့နှစ်တွေ အနည်းငယ်ကြာသွားတဲ့...နောက်...မွန်မွန်...တစ်ယောက်.....ဘွဲ့ လွန်တက်ခဲ့တယ်...မမကတော့ နောက် ကလေးတစ်ယောက် ရတယ် ..ကလေးကတော့ မွေးတုန်းကတော့ အသားညိုတယ် ကိုကြီးနဲ့ ရခဲ့လား ကို ထွန်းနဲ့ ရတာလားဆိုတာတော့ မဝေခွဲတတ်ဘူးရယ် မျက်နှာပေါက်လေးက မမနဲ့တူနေခဲ့တယ် မောင့်ကိုတော့ ခွင့်လွှတ်ဖို့ ပြောတော့ မောင်ကတော့ ခွင့်လွှတ်ပါတယ်မဆန္ဒ နဲ့မ စိတ်ချမ်းသာသလို နေရင် မောင်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်တဲ့မွန် ဒီဘ၀ထဲက လွတ်မြောက်အောင် လုပ်တော့မယ် မောင်ရယ်လို့ တစ်ခွန်းထဲ ပြောမိတယ် နောက်ပိုင်း လိင်ကိစ္စ ဆိုတာ ..တစ်ခါတစ်လေမှ ကိုထွန်းနဲ့ ပဲ လုပ်ဖြစ်တယ် နောက်တော့ MRCP တက်ဖို့စကောလားရှစ် ရခဲ့တယ်မွန် ခုတော့... အင်္ဂလန်ရဲ့ နယ်မြို့ ဆေးရုံလေးမှာပေါ့ချစ်ရတဲ့ မောင်ကတော့ မွန့် ရဲ့ အရိပ်တွေ ကင်းဝေအောင် တစ်ခါတစ်လေမှပဲ ဖုန်းခေါ်ဖြစ်တယ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လိုပေါ့ တစ်ခါတစ်လေ တော့လည်း မွန်...တမ်းတမိပါတယ်....အရာအားလုံးကိုပေါ့ ..........ဲပြီးပါပြီ.........